တန်းတူ Tranquillus | စက်တင်ဘာ 20, 2021 | web ပေါ်မှာ |
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့်စကားပြောဆိုမှုစတင်ရန်သင်ယူခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝေါဟာရဖြစ်သည်။ မင်းနားလည်တယ်၊ သေချာနားလည်တယ်၊ တစ်ဖက်လူနဲ့ဆွေးနွေးဖို့သေချာစေတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ “ ငါနားမလည်ဘူး”၊ “ မင်းအဲဒါကိုထပ်ပြောလို့ရမလား၊ ”“ မင်းဘာကိုခေါ်တာလဲ” တို့သည်အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ အီတလီနှင့်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီဘာသာစကားများဖြင့်သင်ဖော်ပြနိုင်ရန်ကူညီမည့်အလွန်ရိုးရှင်းသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ interlocutor ကမင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်တာသေချာတာကနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့စကားစမြည်စလုပ်ဖို့အတွက်အခြေခံပဲ။ မင်းဘာသာစကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်တဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာခရီးသွားနေချိန်မှာဒီဝေါဟာရကိုသိခြင်းကအခြေအနေများစွာမှာအမှန်တကယ်အသက်ကယ်နိုင်တယ်။ "မင်းအဲဒါကိုထပ်ပြောလို့ရမလား"၊ "မင်းအဲဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ" ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘဲ။ ဒါမှမဟုတ် "မင်းငါ့ကိုနားလည်လား" သင့်အားအခြားသူတစ် ဦး နှင့်အခြေအနေများအားရှင်းလင်းစေပြီးသင့်ကိုနားလည်စေနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ စကားစမြည်ဘယ်လိုစရမှန်းမသိတာကအခြေအနေအားလုံးမှာအဆင်ပြေဖို့မလုံလောက်ပါဘူး။ MosaLingua ကဲ့သို့ဘာသာစကားသင်ယူမှုအပလီကေးရှင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းကဲ့သို့အခြားဝေါဟာရပိုမိုလေ့လာရန်၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုတွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်အောင်သို့မဟုတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ သင်၏ကူးလူးဆက်ဆံမှုအားလုံး၌ပိုအဆင်ပြေရန်ဘာသာစကားမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လေ့ကျင့်ပါ။
ထို့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ အီတလီနှင့်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီဘာသာတို့ဖြင့်စကားစမြည်စနည်းကိုရှာဖွေရန်အောက်ပါစကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှုန်းများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မင်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ဖလှယ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖို့ငါတို့အတွက်ပဲကျန်တော့တယ်။
“ ငါကပြင်သစ်လူမျိုးပါ” လို့ပြောပါ
အင်္ဂလိပ်: ငါအမေရိကန် / အင်္ဂလိပ်
ဂျာမန်: Ich bin Deutsche / r
ပေါ်တူဂီ: Eu sou brasileiro (a)
အီတလီ: Sono italiano / a
စပိန်: Soy español (a)
ဂျာမန်: Ich verstehe nicht
ပေါ်တူဂီ: Não Heari
အီတလီ: Non capisco / Non ho capito
စပိန်: No lo entiendo
"ငါ့ကိုနားလည်လား" လို့ပြောနေတာ ^
ဂျာမန်: Verstehen Sie mich?
ပေါ်တူဂီ: Vocêestá me hearendo?
အီတလီ: Mi capisce?
“ တစ်ယောက်ယောက်ကပြင်သစ်စကားပြောတတ်လား” ဟုပြောပါ
အင်္ဂလိပ် - အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်သလား။
ဂျာမန်: Spricht မနေ့က jemand Deutsch?
ပေါ်တူဂီ: Háalguém aqui que fale português?
အီတလီ: C'è qualcuno che parla italiano?
စပိန်: ¿ Alguien habla inglés?
"[ဘာသာစကားသုံးစကား] မှာဘယ်လိုပြောမလဲ?" ^
အင်္ဂလိပ် - သင် [ပန်းတိုင်] ဘာသာစကားဖြင့်သင်မည်သို့ပြောသနည်း။
ဂျာမန်: Wie sagt man … auf [Zielsprache]?
ပေါ်တူဂီ - Como se diz … em [idioma]
စပိန်: Cómo se dice … en [lengua de destino]
ဂျာမန်: Wie nennen Sie das?
ပေါ်တူဂီ: Como é o seu nome?
အီတလီ: လာကြ chiami questo?
စပိန်: ¿Cómo llamasaesto?
"ဘာလုပ်တာလဲ ... " လို့ပြောပါ
အင်္ဂလိပ်: ... ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
ဂျာမန်: ဟုတ်လား ... ?
ပေါ်တူဂီ: အိုခေအရေးပါသလား ...
အီတလီ: Che ကအရေးပါတာလား။
စပိန်: ¿Qué significa ... ?
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည်းဖြည်းပြောပါ ^
ဂျာမန်: Langsamer, bitte
ပေါ်တူဂီ - Mais devagar၊ ကျေးဇူးပြုသည်
အီတလီ: Più piano / lentamente, favore
စပိန်: ¿ Puedes hablar más despacio၊ ကျေးဇူးပြုသလား။
“ ငါစကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး [ပစ်မှတ်ဘာသာစကား]” လို့ပြောပါ
အင်္ဂလိပ်: ငါမပြောတတ်ဘူး [ပစ်မှတ်ဘာသာစကား] (အရမ်းကောင်းတယ်)
ဂျာမန်: Ich spreche kein / nicht so gut [Zielsprache]
ပေါ်တူဂီ: Eu não falo (bem) o [idioma]
အီတလီ - Non parlo (Bene) [lingua di arrivo]
စပိန် - no hablo [lengua destino] (muy bien)
“ ငါစကားနည်းနည်းပြောမယ် [ပစ်မှတ်ဘာသာစကား]” လို့ပြောပါ
အင်္ဂလိပ်: ငါစကားနည်းနည်းပြောနေတယ် [ပစ်မှတ်ဘာသာစကား]
ဂျာမန်: Ich spreche (ein bisschen) [Zielsprache]
ပေါ်တူဂီ - Eu falo um pouco de [idioma]
အီတလီ: Parlo (un po ') [lingua di arrivo]
စပိန်: Hablo (un poco) [lengua de destino]
ဂျာမန်: Sie haben mich falsch verstanden
အီတလီ: Lei mi ha capito male
စပိန်: Creo que ငါမကြားဖူးဘူး
ကျေးဇူးပြု၍ "ကျေးဇူးပြုပြီးထပ်ပြောနိုင်လား" ဟုပြောပါ
အင်္ဂလိပ်: ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုထပ်ပြောနိုင်လား။ / ထပ်ပြောမလား။
ဂျာမန်: Kannst du das bitte wiederholen?
ပေါ်တူဂီ: Você pode repetir, por favor?
အီတလီ: Puoi ripetere အကြိုက်ဆုံးလား။
စပိန်: ¿ Me lo puedes repetir, por favor?
“ ငါ [ရည်မှန်းချက်ဘာသာစကား] ကိုသင်ယူနေတယ်” လို့ပြောပါ
အင်္ဂလိပ်: ငါသင်ယူနေတယ် [ရည်မှန်းချက်ဘာသာစကား]
ဂျာမန်: Ich lerne [lZielsprache]
ပေါ်တူဂီ - Estou aprendendo [idioma]
အီတလီ - Sto imparando [lingua di arrivo]
စပိန်: Estoy aprendiendo [lengua de estudio]
ဒီမှာ ! ယခုသင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌အသုံးဝင်သောဘာသာစကား ၅ မျိုးဖြင့်စကားစမြည်စရန်သင်မည်သို့သိသနည်း။ ဒါကြောင့်မင်းဒီဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ဖို့မရည်ရွယ်ရင်တောင်မင်းကတစ်ခါတစ်ရံမှာ ... ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေကနေအနည်းဆုံးရုန်းထွက်နိုင်တယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရန်ကောင်းပါပြီ။ မင်းအဲဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်စုတစ်ခုချန်ထားပါ၊ ၎င်းသည်ဆောင်းပါးများထပ်ရေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်
ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အားဘာသာစကားတစ်မျိုး (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ သင်ယူလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတင်းကြီး ၂ ခုရှိသည်။ ပထမ: သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။ ဒုတိယကောင်းသောသတင်း - သင် စတင်၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏အခမဲ့စမ်းသပ်မှုကိုဖွင့်ပါ၊ ဤထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုအသုံးချပြီးဘာသာစကားများကို ၁၅ ရက်ကြာလေ့လာပါ။
MosaLingua Premium (Web & Mobile) မှဝေါဟာရစာတန်းများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ စာတန်းထိုးများ၊ အသံစာအုပ်များနှင့်မူရင်းဗားရှင်းကိုလေ့လာရန် Flashcards များ ချက်ချင်းစတင်ပါ (၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်မပါပါ) ။
တန်းတူ Tranquillus | သြဂုတ်လ 30, 2021 | web ပေါ်မှာ |
မင်းကပိုရိုင်းတယ်၊ ရိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါပိုပြီးကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတယ်လို့မင်းခံစားဖူးလား။ ဒါဟာပုံမှန်ပါပဲ။ အမှန်မှာဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူခြင်းသည်အခြားသူတစ် ဦး သို့အမူအကျင့်သို့ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုလေ့လာမှုများစွာကအတည်ပြုတတ်သည်။ ဘာသာစကားတစ်ခုသင်ယူခြင်းသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်သနည်း။ ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာခြင်းသည်ပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုပြောင်းလဲစေကြောင်းလေ့လာမှုများစွာကပြသသည်။
သုတေသီများသည်ယခုအခါတညီတညွတ်တည်းဖြစ်သည်၊ ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းသည်သင်ယူသူများ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပြောင်းလဲစေသည်။ ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်သောပထမဆုံးလေ့လာမှုကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် psycholinguist Susan Ervin-Tripp ကဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့်စိတ်ပညာနှင့်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးမှုလေ့လာမှုများတွင်ရှေ့ဆောင်ခဲ့သည်။ Susan Ervin-Trip သည်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောတတ်သည့်လူကြီးများနှင့်ပထမဆုံးစမ်းသပ်လေ့လာမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဘာသာစကားပေါ် မူတည်၍ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောဆိုသောအကြောင်းအရာများသည်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟူသောယူဆချက်ကိုအသေးစိတ်စူးစမ်းလိုသည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် Susan Ervin-Trip သည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုတွင်နေထိုင်သောဂျပန်လူမျိုးအမျိုးသမီးများနှင့်အမေရိကန်များနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အမေရိကတွင်နေထိုင်သောဂျပန်အသိုင်းအဝိုင်းမှခွဲထုတ်ခံရသောဤအမျိုးသမီးများသည်ဂျပန်စကားပြောရန်အခွင့်အလမ်းအလွန်နည်းသည်။ Susan Ervin-Trip မှပြင်ဆင်ထားသောမေးခွန်းလွှာသည်အထူးသဖြင့်အောက်ပါအခြေအနေနှင့်ခံစားချက်တစ်ခုကိုပေါင်းစည်းရန်အဆိုပြုထားသည်။ ဂျပန်စကားပြောသူများသည်အများအားဖြင့်ဂျပန်တွင်“ ကြီးစွာသောကံဆိုးခြင်း” ၏ခံစားချက်ကိုအလေးထားလျှင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဖော်ပြသောခံစားမှုသည်၎င်းသည်“ ဆန္ဒများအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန်” ပါ ၀ င်သည်။
ရိုးရှင်းသောတိုက်ဆိုင်မှုလား။ ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ၊ ပေါ်တူဂီသို့ပြောင်းရွှေ့လာသော Parisian အရွယ်ရောက်ပြီးသူသုတေသီ Michele Koven မှ ၁၉၉၈ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလူမျိုးရေးလေ့လာမှု၌ဤခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့သည်။ သူသည်ဘာသာစကားတစ်ခုစီ (ပြင်သစ်နှင့်ပေါ်တူဂီ) မရ။ ရလဒ်များသည်သိသာထင်ရှားသည့်ဇာတ်ကောင်အပြောင်းအလဲများကိုပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ပုံပြင်များတွင်သူတို့၏အယူအဆများကိုခုခံကာကွယ်ရန်ပိုလိုလားခဲ့ကြပြီးပေါ်တူဂီစကားပြောရာတွင်ပိုအလျှော့ပေးခဲ့သည်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ သူတို့သုံးတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့ဘာသာစကားပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်တွေလည်းပြောင်းသွားတယ်။ Michele Koven သည်သင်တန်းသားများအားဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်အမြဲတမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့သတ်မှတ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမအားပြင်သစ်စကားပြောရာတွင်ဒေါသထွက်နေသောခရီးသွားတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သောသူတို့ထဲမှတစ် ဦး ကသူမသည်သူမအားအာရုံစိုက်လိုသောဆန္ဒမရှိသော၊ စိတ်ပျက်ယဉ်ကျေးပြီးစိတ်ရှည်သောဘဏ်ဖောက်သည်အဖြစ်ဖော်ပြရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူသည်ပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့်ပြောသောအခါရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဖြစ်သည်။
ဒီလေ့လာမှုနှစ်ခုကငါတို့ကိုဘာပြောလဲ။ မင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုနိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အဲဒါကရိုးရှင်းပါတယ်၊ တိကျပြီးကွဲပြားတဲ့ဝေါဟာရတစ်ခုကိုလေ့လာပြီးသုံးဖို့အရေးကြီးတယ်။ Babbel နည်းလမ်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုအခြေအနေများနှင့်လုံးဝလိုက်ဖက်ညီသောစကားပြောလေ့ကျင့်ခန်းများပေါ်တွင်အခြေခံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်းအတွက်ဘာစိတ်ဝင်စားမှုရှိလဲ။ မင်းရဲ့အချိန်ဇယားမှာဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူဖို့သီးသန့်အချိန်နည်းနည်းရှာတာကပိုလွယ်ရုံတင်မကဘဲသင်ခန်းစာတွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကမင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်။ ဘာသာဗေဒနှင့်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကျွမ်းကျင်သူများကဖန်တီးထားသော Babbel သင်တန်းများသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီဘာသာစကားဝေါဟာရနှင့်ဘာသာစကားဗဟုသုတကြွယ်ဝစေရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ဒါဟာမင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ပြီးတိုးတက်ကြီးပွားဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုလို့မင်းမထင်ဘူးလား။
ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်း၏ဆက်စပ်မှုသည်၎င်းကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းမှဖြစ်ပေါ်လာသောအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဆောင်သည်။ အမှန်အားဖြင့်၊ ခရီးသွားနေစဉ်သူ၏လေ့လာမှုသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူခြင်းသည်သင်ယူသူအတွက်တူညီသောသက်တောင့်သက်သာရှိစေမည်မဟုတ်၊ ထိုဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုသောဘာသာစကားသည်သင်ယူသူအတွက်တူညီသောခံစားချက်ကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်ဘာသာစကားကိုပြဌာန်းပါက၎င်းအားအပျက်သဘောဆောင်။ ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်စေသည်ဟုယူဆပါသည်။
အမေရိကန်သတင်းထောက် Robert Lane Greene သည်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောဆိုသောသူများသည်သီးခြားဘာသာစကားတစ်ခုနှင့်အထူးသဖြင့်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟူသောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအခြေအနေများသည်တွေ့ကြုံခံစားမှုများကိုလွှမ်းမိုးသည်။
Babbel နည်းလမ်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုအခြေအနေများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောစကားပြောဆိုမှုလေ့ကျင့်ခန်းများပေါ်တွင် ၁၅ မိနစ်သင်ခန်းစာများကိုအခြေခံသည်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းကိုမင်းရဲ့အချိန်ဇယားမှာပေါင်းစည်းဖို့အရမ်းလွယ်ရုံတင်မကဘဲသင်ခန်းစာတွေမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကိုက်ညီတယ်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခု
ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ သင်ယူမှုအခြေအနေကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္playsကနေပါ ၀ င်နေတယ်၊ ​​ဘာသာစကားသင်ယူပြီးသားလူတွေကော။ polyglots များ၏ကိစ္စသည်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်၊ အမှန်မှာများစွာသောလေ့လာမှုများသည်သုံးသောဘာသာစကားပေါ် မူတည်၍ နောက်ဆုံးသည်ပိုနည်းသည်ထက်နည်းသည်ကိုပြသလေ့ရှိသည်။ လေ့လာမှုများစွာကဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တွေးခေါ်ပုံ၊ တွေးခေါ်ပုံနှင့်တိုးတက်ထွန်းကားမှုတို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းပြသသည်။
Prussian State of Minister and Berlin of the New University of Berlin ကိုတည်ထောင်သူ Wilhelm von Humboldt သည်လူမျိုးများကိုကိုယ်စားပြုသောမနုဿဗေဒစီမံချက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ ဘာသာစကားသည်လူသားအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု၏ဖော်ပြချက်တွင်အခြေခံမူလဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ့အလိုအရဘာသာစကားများသည်လူသားအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုစီအတွက်သီးခြားကမ္ဘာ၏ရူပါရုံကိုဖော်ပြသည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုငါတို့ရဲ့အမြင်ဟာငါတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ငါတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်တယ်လို့သူယုံကြည်တယ်။ ထို့ကြောင့်ဒုတိယဘာသာစကားပြောခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှုထောင့်ကိုသဘာဝကျကျပြောင်းလဲစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြားရှုထောင့်မှကြည့်ခွင့်ပြုသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင်အမေရိကန်ဘာသာဗေဒပညာရှင် Edward Sapir နှင့် Benjamin Lee Whorf တို့ပြုလုပ်သောဘာသာဗေဒဆိုင်ရာနှိုင်းရမှုကဲ့သို့သောအခြားလေ့လာမှုများသည်ဘာသာစကားနှင့်ကမ္ဘာ၏သီးခြားသဘောတရားအကြားခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးကိုပြသခဲ့သည်။ သူတို့၏အဆိုအရအမျိုးသားများသည်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှုများအလိုက်စကြဝesာအသီးသီးတွင်နေထိုင်ပြီးပြောဆိုသောဘာသာစကားအားဖြင့်ဖော်ပြကြသည်။
ဘာသာစကားသင်ယူမှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ဤကွဲပြားခြားနားသောလေ့လာမှုများသည် plurilingualism နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ကိုပြသတတ်သည်။ သင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောသောအခါအခြားအရာများ၏ခံစားချက်ကိုရှင်းပြသည်။
ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကွာခြားချက် - ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးတွင်မိမိကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်နှင့်အထူးသဖြင့်လူတစ် ဦး ၏ခံစားချက်များကိုပြောဆိုနိုင်ခြင်း (သို့) ဟာသနှင့်ဟာသလုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားမှု၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသည်နိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်နီးစပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ဘာသာစကားနှစ်မျိုး (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုတူသောဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးလူမျိုးများတွင်မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ကွဲပြားသောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဘာသာစကားကွာခြားချက် - ဘာသာစကားတစ်ခု၏သဒ္ဒါနှင့်အထားအသိုသည်ဘာသာစကားတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကွဲပြား။ စကားပြောပုံကိုပြောင်းလဲစေသည်။
ဤကွဲပြားခြားနားသောအချက်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်ဘာသာစကားနှင့်မတူသောဘာသာစကားတစ်ခုတွင်တွေးခေါ်နိုင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သူ့တွင်ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုသိမြင်နားလည်ဖို့၊ ဘာသာပြန်ဖို့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့အဲဒါကြောင့်တိုးတက်အောင်မြင်လာတာ။ ဒါဆို Babbel နဲ့ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူဖို့မင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ။
အလွတ်ကျက်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း။ - ဗွီဒီယို
တန်းတူ Tranquillus | သြဂုတ်လ 25, 2021 | web ပေါ်မှာ |
သင် ဦး တည်သောဘာသာစကားဖြင့်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတိုးတက်လိုပါသလား။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများကိုသုံးခြင်းဖြင့်သင့်ပန်းတိုင်ကိုထိရောက်စွာကူညီနိုင်သည်။ ဒီနည်းကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။ MosaLingua မှာငါတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lisa Joy ကမင်းရဲ့မှတ်ဥာဏ်နဲ့ဘာသာစကားသင်ယူမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့ထိရောက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖန်တီးဖို့နည်းလမ်းလေးမျိုးကိုသင်ပေးတယ်။
သင်၏ ဦး တည်ရာဘာသာစကားတွင်တိုးတက်စေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကိုသုံးပါ
လူ ဦး ရေ၏ ၆၅% နီးပါးသည်အမြင်အာရုံလေ့လာသူများဖြစ်ကြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိနေပါသည်။ အမှန်တော့ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပုံများပို့ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။
ဤတွင်ပိုမိုနားလည်ရန်အမြန်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စူပါမားကတ်သို့သင်၏နောက်ဆုံးခရီးအကြောင်းစဉ်းစားပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှမှတ်မိဖို့ကြိုးစားပါ။ မင်းဝယ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေလိုမျိုးတိကျသေချာတဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားပါ၊ မင်းခြင်းတောင်း (သို့) ဈေးဝယ်လှည်းကိုယူခဲ့ရင်၊ မင်းတစ်ယောက်တည်းဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ရှိခဲ့ရင်၊ နောက်ဆုံးမှာမင်းဘယ်လိုပေးဆပ်ခဲ့လဲ။ အဲဒါကမင်းအကူအညီနဲ့သင့်တော်တယ်ဆိုရင်မင်းမျက်လုံးမှိတ်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
မင်းဒီအဖြစ်အပျက်ကိုမင်းခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုမှတ်မိလဲ။ ၎င်းသည်စကားလုံးများ၊ အသံများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများဖြင့်လား။ အများစုကပုံတွေနဲ့တုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ သို့ဆိုလျှင်သင်သည်အမြင်အာရုံသင်ယူသူဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကိုသက်ဝင်စေတဲ့အခြားအချက်အလက်အချို့ကိုမင်းရနိုင်တယ်။
အခုမင်းက“ ငါတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကပုံတွေပို့တာနဲ့ငါတို့အလုပ်လုပ်တယ်” လို့မင်းဆိုလိုတာကိုမင်းနားလည်ပြီအဲဒါကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးမှတ်ဥာဏ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တွေလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေကိုကော်ပီကူးရအောင်။
ဘာသာစကားသင်ယူမှုနယ်ပယ်၌စကားအသုံးအနှုန်းအသစ်များအားပိုမိုမြန်ဆန်ထိရောက်စွာသင်ယူနိုင်ရန်ကူညီပေးမည့်အကြံဥာဏ်တစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုသုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ပြင်သစ်စကား“ sun” ကိုမှတ်မိရန်လိုလျှင်၊ ၎င်းကိုနေ၏စိတ်ကိုကိုယ်စားပြုသောစကားလုံးနှင့်ပေါင်းလျှင်၎င်းကိုမှတ်မိရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်။
အဲဒါအလုပ်ရှိသေးလား။ အချိန်တိုင်းမဟုတ်၊ ၎င်းသည်အဖြစ်များလွန်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်မရှုပ်ထွေးပါ။ သင်ဤနေရာတွင်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုသင်သင်ယူလိမ့်မည်။ ဤထူးခြားချက်လေးခုအနက်တစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်ပိုသောပုံများကိုဖန်တီးရန်သေချာပါစေ။
မင်းပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရအောင်သူတို့ကိုမင်းရဲ့ဘာသာစကားသင်ယူမှုမှာချက်ချင်းအသုံးချနိုင်အောင်သူတို့တစ် ဦး စီကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
ကောင်းမွန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံလွှာကိုပုံကြီးချဲ့ရမည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်မြင်သောအရာများနှင့်မကိုက်ညီသောအတိုင်းအတာများနှင့်အချိုးအစားများရှိရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်ပြင်သစ်ဘာသာ၌“ pied” ဟူသောစကားလုံးကိုအလွတ်ကျက်လိုလျှင်အခြားတစ်ပေထက်ပိုမြင့်သောလူတစ်ယောက်ကိုသင်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်း unghia (အီတလီလက်သည်းခြေသည်း) ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်လက်သည်းတွေကမြေကြီးနဲ့အရမ်းထိနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒီလိုပုံမျိုးတွေမေ့ဖို့ခက်တယ်။
“ စာအုပ်” စာလုံးကိုအလွတ်ကျက်ရန်၊ ကြောင်သည်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုအုပ်ကာစဉ်းစားပါ။ ဤနည်းကို သုံး၍ ကစားပွဲတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ပါ။ တကယ်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်။
မင်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကပုံသေအရာဝတ္ထုတွေထက်ရွေ့လျားမှုကပိုတောင်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းသိလား။ ဒါကမင်းပုံရိပ်တွေကိုမင်းရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာပိုကောင်းအောင်မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ပါ၊ အဲဒါတွေကိုမေ့ဖို့ပိုခက်တယ်။ သငျသညျ coche (စပိန်ဘာသာဖြင့်ကား) ကိုမှတ်မိလျှင်၊ ရွေ့လျားနေသောကားတစ်စီးကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ ဒါမှမဟုတ်ပြင်သစ်လို“ ကျောက်” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမှတ်မိရမယ်ဆိုရင်လှိမ့်နေတဲ့ကျောက်တုံးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
စိတ်ခံစားမှုများသည်သင်၏မှတ်ဥာဏ်၌အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ သင်နားလည်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းပြင်းထန်သောအတွေ့အကြုံနှင့်ပျော်ရွှင်မှုသို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းချိန်များနှင့်ဆက်စပ်နေသောနေရာများကိုမေ့ပစ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ငါတို့ကဒီအရောင်တွေ၊ သူ့အထပ်တွေကိုသတိမပြုဘဲအလုပ်လုပ်ဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ကိုအတူတူဖြတ်သွားနိုင်တဲ့အခါငါတို့ကဒီအမှတ်တရလေးတွေရဲ့အသေးဆုံးအသေးစိတ်တွေကိုမှတ်မိဖို့အံ့သြတယ်။
သင်ဟာအသက်အရင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းသင်သိသောအခါသင်ဘယ်မှာရှိနေကြောင်းအတိအကျသင်မှတ်မိနေပေမည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုတွင်“ ခွေး” ဟူသောစကားလုံးကိုသင်သင်ယူသည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုသင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ပေါင်းနိုင်သည်။
ဒါပါပဲ ! ဒီနည်းပညာတွေဘယ်လောက်လွယ်လဲကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထိရောက်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကိုဖန်တီးဖို့မင်းရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီ။ သင်၏စိတ်ကူးများကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမျှဝေ။ ဤနည်းပညာလေးမျိုးအနက်မည်သည့်အရာကိုသင်သုံးလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
နောက်ဆုံးမှတ်ချက်တစ်ခုရှိသည်ကား၊ ၎င်းတို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရပိုမှတ်မိရန်ပိုလွယ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံကိုပေါင်းစပ်ရန်အလွန်တရာပြုမူခြင်းသည်အလွတ်ကျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလျှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်များသည်ပိုမိုထိရောက်သည်။ ဒါကြောင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုရယူပြီးပျော်ပျော်နေပါ။
ဗီဒီယိုမှာ Lisa-Joy ရဲ့အကြံပေးချက်အားလုံးကိုသင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြစ်သော်လည်းလိုအပ်လျှင်ပြင်သစ် (နှင့်အခြားဘာသာစကားများ) တွင်စာတန်းထိုးများရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုအသက်သွင်းရန်ဘီးကိုနှိပ်ပါ၊ လိုအပ်ပါကစကားပြောဆိုမှုအရှိန်ကိုလည်းနှေးစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube channel သို့စာရင်းသွင်းပါ။
တန်းတူ Tranquillus | သြဂုတ်လ 18, 2021 | web ပေါ်မှာ |
အသက်အရွယ်သည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူရန်အတားအဆီးလုံးဝမဟုတ်ပါ။ အငြိမ်းစားများသည်သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်သောလုပ်ဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုခုအတွက်အချိန်ပေးရသည်။ လှုံ့ဆော်မှုများစွာရှိသည်၊ အကျိုးကျေးဇူးများကိုရေတိုနှင့်ရေရှည်တွင်မြင်ရသည်။ ပညာသည်အသက်အရွယ်နှင့်လာသည်လား။ အငယ်ဆုံးသားကိုလျှာပွတ်တိုက်ခြင်းဟုခေါ်သည်၊ သို့သော်သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှသင်၏အခက်အခဲများနှင့်အားနည်းချက်များကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ပြီးသင်မျှော်လင့်ထားသောမျှော်မှန်းချက်များနှင့်ပြည့်စုံသောရလဒ်တစ်ခုရရှိရန်၎င်းတို့ကိုလျင်မြန်စွာကျော်လွှားနိုင်သည်။
ကလေးတွေဘာသာစကားလေ့လာရတာပိုလွယ်တယ်လို့မကြာခဏပြောလေ့ရှိတယ်။ ဒါကသက်ကြီးရွယ်အိုတွေနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူရာမှာကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုတာလား။ အဖြေ: မဟုတ်ပါ၊ ၀ ယ်ယူမှုသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်မတူညီသောကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အချို့လေ့လာချက်များကနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူရန်စံပြအသက်အရွယ်သည် ၃ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိအလွန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကဖြစ်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ ဦး နှောက်သည်ပိုမိုလက်ခံလွယ်လာပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ MIT (Massachusetts Institute of Technology) မှသုတေသီများသည်ယဉ်ကျေးမှု၊ ဇီဝဗေဒနှင့်ဇီဝကမ္မအကြောင်းများကြောင့်အသက် ၁၈ နှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်ပိုမိုခက်ခဲလာသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းအသက်အရွယ်တစ်ခုတွင်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်အတော်လေးဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်၊ ၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။
Ifop လေ့လာမှုအရသက်ကြီးရွယ်အို ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူနိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ဤအွန်လိုင်းသင်ယူမှုနည်းလမ်းသစ်များကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်တာဝန်ယူကြသည်။ ၎င်းတို့အနက် ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဟုပင်ယုံကြည်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်သူတို့သည်အငြိမ်းစားယူကြပြီးသက်ကြီးရွယ်အိုများစွာသည်အသစ်အသစ်သောအရာများကိုဆက်လက်သင်ယူနေကြသည်။ သူတို့သည်ဘာသာစကားအသစ်များသင်ယူခြင်းအပါအ ၀ င်လှုပ်ရှားမှုများကိုအဆက်မပြတ်လုပ်နေကြသည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများအများဆုံးသင်ယူသောဘာသာစကားများထဲတွင်အင်္ဂလိပ် (၄၅%)၊ စပိန် (၂၇%)၊ အီတလီ (၁၉%) နှင့်ဂျာမန် (၁၁%) တို့ဖြစ်သည်။
သင်အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည် ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းလာနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် Ifop လေ့လာမှုကသက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ၁၈-၃၅ နှစ်အရွယ်များထက်သူတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်တွင်ပိုမိုထက်မြက်ပြီးရဲရင့်မှုရှိကြောင်းပြသည်။
Saint Jean de Luz တွင်အငြိမ်းစား Henri၊ ၇၅ နှစ်ကိုငါတို့စပိန်ကိုသင်ယူရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောအရာကိုငါတို့မေးခဲ့သည်။ သူကဆောင်းရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီတွေမှာသူနေတဲ့ဆောင်းရာသီနဲ့ဆောင်းရာသီတွေမှာသူတည်းခိုတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုရှိတယ်လို့စပိန်ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ သူသည်ဒေသခံများနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဂေါက်ကလပ်သို့သွားသောအခါသူ့ကိုယ်သူနားလည်စေလိုသည်။ သူ့တွင်အချိန်နှင့်သင်ယူရန်လှုံ့ဆော်မှုရှိသောကြောင့်သူသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသည်။ သူသည်စပိန်ရှိဂေါက်ကလပ်နှင့်တံတားကစားသမားများနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်စီမံထားပြီးဖြစ်သည်။ Mosalingua နှင့်သူ၏စွန့်စားခန်းအကြောင်းငါတို့အားပြောပြနိုင်သည့်အတွက်သူအလွန်ဂုဏ်ယူသည်။
ဘာသာစကားများအတွက်ဤစိတ်အားထက်သန်မှုအတွက်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အငြိမ်းစားယူခြင်းသည်အတားအဆီးအတားအဆီးများကိုလွတ်မြောက်စေသည်၊ များစွာသောသူတို့သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းထားခဲ့သောပရောဂျက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေကြသည်၊ သူတို့၏အသိဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေခြင်း၊ ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးစေရုံသာမကမကဘူး။ ဘာသာစကားတစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းဖြင့်အငြိမ်းစားယူရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်ဘဝလမ်းကြောင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုအာရုံစိုက်လိုစိတ်ကိုပြသည်။
သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေပါ
အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာလူတစ် ဦး ၏ဆက်သွယ်ရေး၊ ဖလှယ်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုးတက်စေလိုသောဆန္ဒဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့လူများသည်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်၌ပြောသောဘာသာစကားကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိချင်ကြသည်။ အခြားသူများသည်၎င်းတို့၏သားသမီးများနှင့်မြေးများအားကြည့်ရှုနိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ဘာသာစကားနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ချင်သော်လည်း၊ ထို့ကြောင့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အလေ့အကျင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Ifop စစ်တမ်းကိုဖြေဆိုခဲ့သောသက်ကြီးရွယ်အို ၆၃% ကခရီးသွားခြင်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (၄၀%) ထက်ဘာသာစကားပြောဆိုရန်ပိုကောင်းသည်ဟုပြောကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ပညာရေးစွန့်စားမှုတစ်ခုအတွက်ရှုခင်းသစ်များဆီသို့ခရီးသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အမှန်တော့ဘာသာစကားအတားအဆီးမရှိဒေသခံများနှင့်အလိုအလျောက်ဖလှယ်ခြင်းသည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားခြင်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီးအခြားသူများမှာ၎င်းတို့၏အငြိမ်းစားများကိုနိုင်ငံခြားသို့ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။
သက်ကြီးရွယ်အိုများဘာသာစကားအသစ်သင်ယူရန်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမှာ၎င်းတို့၏မိသားစုအရင်းများနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်မိဘများ၏မိခင်ဘာသာစကား၌ပြောဆိုဆက်ဆံလိုသောဆန္ဒဖြစ်သည်။ အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ် Simone ကဲ့သို့သူမ၏မိခင်အဘိုးအဘွားများမှတဆင့်ဂျာမန်လူမျိုးများသည်သူမ၏ဘိုးဘေးများ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်လိုသည်။ သူမသည်ငယ်စဉ်အခါဂျာမန်စကားပြောဆိုမှုကိုသတိရသည်၊ ငယ်စဉ်ကသင်ယူခဲ့သောသီချင်းများ၊ ထို့နောက်အလေ့အကျင့်ပျောက်သွားသည်။ သူမသည်ပျိုးခင်းတေးဂီတအချို့ကိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုသောတက္ကသိုလ်၌အတန်းတက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏အရင်းခံဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ခြင်းသည်၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်မူလဇစ်မြစ်သို့ပြန်သွားခြင်း၊ မိသားစုသစ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းပင်ဖြစ်နိုင်သည်။
အငြိမ်းစားယူခြင်းသည်ခက်ခဲသောခြေလှမ်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဘာသာစကားတစ်ခုသင်ယူခြင်း၌နှစ်မြှုပ်ခြင်းသည်အလုပ်များနေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ္တိနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခုကိုအဘယ့်ကြောင့်မယူသနည်း။ သင်တန်းတက်ရန်မှတ်ပုံတင်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာ ဦး နှောက်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်ရန်သင်နေ့စဉ်မှတ်ဥာဏ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးအလုပ်လုပ်စေနိုင်သောအချက်ဖြစ်သည်။ သဒ္ဒါစည်းမျဉ်းများ၊ ဝေါဟာရများကိုလေ့လာသည့်အခါမှတ်ဥာဏ်ကိုအလွန်သုံးသည်။ ထို့ပြင်ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူခြင်းသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏သိမြင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေနိုင်ပြီးအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါစတင်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။ တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုလိုက်သင်ခန်းစာများ၊ လေ့ကျင့်မှု၊ အသက်ကြီးသူများအတွက်ဘာသာစကားရှိနေခြင်း၊ အခမဲ့အချိန်တက္ကသိုလ်များ (သို့) အသက်အရွယ်တက္ကသိုလ်အားလုံး (UTA)၊ ဒေသဘာသာစကားအသင်းအဖွဲ့များ၊ အွန်လိုင်းသင်တန်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။ အဓိကအရာသည်သင်၏ဆန္ဒများနှင့်လိုအပ်ချက်များအတိုင်းမှန်ကန်သောသင်ယူမှုကြားခံကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
သင်ယူမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်အချိန်ယူပါ။ အင်တာနက်ကျေးဇူးကြောင့်တိုးတက်ရန်အကြောင်းအရာများစွာရှိသည်။ သတင်းစာများ၊ သီချင်းများ၊ podcasts များ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေိများ ... ၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှပျော်စရာဖြစ်စေရန်သင်လိုအပ်သမျှအရာအားလုံးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ မင်းမှာမက်ထရိုမှာမိနစ် ၂၀၊ စောင့်ခန်းမှာ ၁၀ မိနစ်ရှိရင်မင်းရဲ့ဘာသာစကားသင်ယူမှုအပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုသင်ယူခြင်းသည်စည်းကမ်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သည်။
စကားပြောပါ၊ အမှားလုပ်ရန်မကြောက်ပါနှင့်၊ သင်လေ့ကျင့်လေလေသင်တိုးတက်လေဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အခြားသူများနှင့်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ“ တွဲဖက်” လက်တွဲဖော်ရှိခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် virtual တွေ့ဆုံရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုမြင့်လာပြီးဘာသာစကားအခက်အခဲကပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူး။
Mosalingua သည်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့်ကွန်ပျူတာတို့တွင်လျင်မြန်သောသင်ယူမှုနည်းလမ်းများကိုပေးသည်။ သင်၏အသက်၊ သင်နေထိုင်သောနေရာ (သို့) သင်၏လှုံ့ဆော်မှုများရှိပါစေ၊ သင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်အနီးအနား၌ virtual နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနည်းပြရှိလိမ့်မည်။ ထိုနည်းလမ်းသည်တစ်ရက်လျှင်မိနစ် ၂၀ ထက်ပိုမလိုအပ်ပါ၊ သုံးလတွင်တိုင်းပြည်အတွင်းသို့ရောက်နိုင်သည်၊ မဂ္ဂဇင်းများဖတ်ရန်လုံလောက်သောအဆင့်သို့ရောက်နိုင်သည်။
မည်သည့်အခါမျှမတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်၊ စတင်ရန်နောက်ကျလွန်းသည်။ ဒါပေမယ့်အခြားအရာအားလုံးထက်ပျော်ရွှင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
Bonjour Senior သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်သူတို့၏စောင့်ရှောက်သူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်၌ဖြစ်စေ၊ သင့်တော်သောတည်းခိုခန်းဌာန၌ဖြစ်စေလက်တွေ့လမ်းညွှန်များ၊ သတင်းနှင့်အထောက်အပံ့များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။
တန်းတူ Tranquillus | ဇူလိုင်လ 15, 2021 | web ပေါ်မှာ |
ဂျပန်ဘာသာတွင်日本 (နိဟွန်း) ဟုခေါ်သည်။ အသုံးအနှုန်းကိုဂျပန်ဘာသာဖြင့်ပြင်သစ်ဘာသာသို့ပေးခဲ့သည်။ သို့သော်ဂျပန်ဟူသောအမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် "Pays du soleil levant" ဟုကူးရေးသည်၎င်းသည်တိုင်းပြည်၏ဘာသာစကားတွင်ယင်း၏စာသားအတိုင်းအတာထက်နည်းသည်။ အဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အနီရောင် disk ကို။ သင်္ကေတများသည်စကားလုံးများနှင့်ဘာသာစကားထက်ကျော်လွန်ပြီးအလံမှတဆင့်ဖော်ပြကြသည်။ ထို့ကြောင့်ဂျပန် (သို့) 日本သည်နက်နဲသောအရာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်းစု၏အလှဆုံးပဟေlesိများထဲတွင်ဂျပန်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။
ဒီတော့ပြင်သစ်လို Japon ဆိုတဲ့စကားလုံး (နှင့်အခြားကမ္ဘာ့ဘာသာစကားအများစုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှ) သည်ဘယ်ကလာသလဲ။ ပေါ်တူဂီသင်္ဘောသားများသည်အရှေ့ဖျားသို့ပင်လယ်ရေကြောင်းဖြင့်ရောက်ရှိသောအခါဂျပန်ကျွန်းစုကို၎င်းတို့အားသတ်မှတ်ပေးသည့်မန်ဒီလူမျိုးများဖြစ်သည်။ “ Jipangu” ဟုအသံထွက်ခဲ့ပြီးမကြာမီတွင်နယ်မြေ၏အမည်မှာဂျပန်ဖြစ်လာသည်။
21.000 ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်၌ 2018 သင်ယူသူနှင့်အတူဂျပန်ဘာသာစကားသန်းနှင့်ချီသောအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်စပိန်ကျောင်းသားများနောက်ကွယ်မှရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် Mishima ၏ဘာသာစကားသည်ဂျပန်ပင်လယ်နှင့်ဖူဂျီတောင်တို့ထက် ပို၍ ဆက်လက်၍ ပျံ့နှံ့နေသည်။ Babbel ကဂျပန်ကိုဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုပေးသည်။
Yamato ခေတ်မှ "Cool Japan" ခေတ်အထိဂျပန်ဘာသာစကား၏သမိုင်း
၂၅၀ ခန့်တွင် Yamato ပြည်နယ်တွင်ပထမဆုံးမင်းဆက်တည်ထောင်ခဲ့သည် - လက်ရှိ Nara စီရင်စုဖြစ်သည်။ ယနေ့မြင်တွေ့ရသောမြင်ကွင်းကျယ်သည်ခေတ်သစ်အဆောက်အအုံများနှင့်ရှေးခေတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအကြားကွဲလွဲနေသောနေရာတွင်ဂျပန်ဘာသာစကား၏ရှည်လျားသောဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဤခေတ်မတိုင်မီရေးသားထားသောမှတ်တမ်းအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ရာစုနှစ်များစွာကတည်းကဂျပန်ဘာသာစကားတည်ရှိခဲ့ရာသည်ပါးစပ်အစဉ်အလာဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်မှဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးများသည်သူတို့၏ဂရပ်ဖစ်စနစ်ကိုကျွန်းစုသို့ပို့ဆောင်ကြသည်။ ၈ ရာစုတွင်နာရာလက်အောက်တွင်ဂျပန်များသည်တရုတ်အတွေးအမြင်ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်အခြားကျွန်းများမှယနေ့ခေတ်ကျွန်းစုများဆက်လက်အသုံးပြုနေသည့်ဂျပန်၏ဤပေါင်းစပ်စနစ်ကိုဖွဲ့စည်းရန်တီထွင်ခဲ့သည်။
၁၇ နှင့် ၁၈ ရာစုနှစ်များအကြားအဲဒိုခေတ်မတိုင်မီကဂျပန်ဘာသာစကားကိုအမှန်တကယ်တရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ခေတ်သစ်တစ်ခုစီသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားအပြောင်းအလဲများကိုဝေမျှပေးသည်။ ၂၀ ရာစုအစတွင်တိုင်းပြည်၏တိုးတက်မှုနှင့်ခေတ်မီတိုးတက်မှုနှင့်ထပ်တူထပ်မျှ Meiji ခေတ်သည်တိုကျိုဘာသာစကားကို အခြေခံ၍ ဘာသာစကားကိုစံသတ်မှတ်သည်။ ၁၉၀၃ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်အစိုးရသည်ကျောင်းများအတွက်ရည်ရွယ်သောဂျပန်ဘာသာစကား၏တရားဝင်လက်စွဲစာအုပ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအပြီးတွင် Florentine စကားသို့မဟုတ်အီတလီပါရီဘာသာစကားကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်အီတလီတို့၏စံသတ်မှတ်ချက်ကိုသတိရစေမည့်ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခု!
"Cool Japan" - တိုကျိုသည် kawaii ခေတ်သို့ရောက်သောအခါ
ဂျပန်ဘာသာစကား၏ယဉ်ကျေးမှုအရ၎င်းနှင့်မတူကွဲပြားလှပါ။ J-Pop၊ manga၊ anime၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ဆူရှီနှင့် "Cool Japan" ဟုခေါ်သောဂျပန်၏ပျော့ပျောင်းသောစွမ်းအားသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Pikachu မှ bento သေတ္တာများနှင့်ကီမိုနိုများအပါအ ၀ င် Hello Kitty အထိ, kawaii (かわいい), ပြင်သစ်ဘာသာတွင်“ ချစ်စရာကောင်းသော” သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့တင်ပို့နိုင်သည့်ခေတ်မှီသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်တွင်ပါဝင်သည်။
ဂျပန်၏အထီးကျန်ဝါဒသည်သမိုင်းကြောင်းအရထင်ရှားသည့်ကြားမှကျွန်းစုသည်ပြင်သစ်နှင့်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ သန့်စင်ခြင်းသင်္ကေတများ၊ ပြင်သစ်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်ဂျပန်လူမျိုးမျိုးဆက်များကိုစစ်မှန်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အထိဖြစ်စေသည်။ ယခုသူတို့သည်Molière၏ဘာသာစကားကိုသင်ယူရန် 200.000 ရှိသည်။ ပန်းချီဆရာ Foujita၊ စားဖိုမှူး Takeuchi နှင့် Kenzo အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ထောင်သူအကြား၊ ဂျပန်လူမျိုးများစွာသည်ပါရီမြို့တွင်အခြေချခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ယဉ်ကျေးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွင်များစွာအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
ဂျပန်ဘာသာစကားတွင်ယခုအခါစပီကာသန်း ၁၃၀ ရှိသည်။ ဂျပန်တွင်အဓိကပြောသောစကားမှာဂျပန်သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဟာဝိုင်ယီကျွန်းများတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဘာသာစကားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည်။ ဟွန်ရှူးတောင်ဘက်ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ ကျော်တွင်တစ်ချိန်ကဂျပန်တို့သိမ်းပိုက်ထားသောကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုသည်ဂျပန်ကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Palau ပြည်နယ် ၁၆ ခုတွင်ပါဝင်သော Angaur ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့လူ ၁၀၀ ကျော်မျှသာရှိသောပစိဖိတ်ကျွန်းတွင်ပါရီမြို့၏ ၁၅ ခုမြောက်အဆောက်အ ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောနေရာတွင်ဂျပန်သည်မျိုးသုဉ်းလုနီးပါးဖြစ်သည်။
ဟီရာဂါနာ၊ ကကက္ကနန်နှင့်ကန်ဂျစ်များ - ဂျပန်ဘာသာစကားသုံးမျိုး
🗾 The katakana
ဟီရာဂါနာနှင့်ကာတာကနာ (အက္ခရာ ၁၀၀ လုံးလုံး) ကိုလေ့လာခြင်းသည်စိရယ်လ်အက္ခရာထက်များစွာပိုကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်တင်အက္ခရာစနစ်နှင့်ဆင်တူသည်ဟီရာဂါနာသည်ဂျပန်စကားလုံးများကိုရေးသားရာ၌အသုံးပြုသောအသံထွက်သင်္ကေတများဖြစ်သည်။ တူညီသောနိယာမတွင်၊ ကကကနာသည်နိုင်ငံခြားမှဆင်းသက်လာသောစကားလုံးများ (တရုတ် မှလွဲ၍) အတွက်ဖြစ်သည်။ ကန်ဂျစ်များအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်တရုတ်ဘာသာစကားမှအမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အသံနှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ ဂျပန်လူမျိုး ၅၀,၀၀၀ ကိုရေတွက်လျှင်၎င်းတို့ထဲမှ ၂,၀၀၀ သာ "သာ" သည်နေ့စဉ်အခြေခံလိုအပ်သည်။ jōyō kanji လို့ခေါ်တဲ့ဒီ "ဘုံအသုံးပြုမှု kanjis" ၏တရားဝင်စာရင်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤဂရပ်ဖစ်စနစ်သုံးခုသည်အတူတကွတည်ရှိပြီးအတူတကွအသုံးပြုကြသည်။ ဝါကျတစ်ခုတည်းအတွင်း၌ပင်ကျမ်းချက်သုံးချက်ကိုရှာတွေ့သည်မှာမဆန်းပါ။
ဂျပန်နှင့်တရုတ်ဘာသာစကားသည်မိသားစုတစ်ခုတည်းလား။ မဟုတ်ပါ။ Kanjis များ၏အမွေအနှစ်သည်သမိုင်းဝင်သက်သက်သာဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘာသာနှင့်ဆက်နွှယ်သောတရုတ် - တိဘက်ဘာသာစကားသည်တရုတ်ဘာသာစကားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဂျပန်သည်သီးခြားဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဤဘာသာစကားသည်သီးခြားမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်၊ တူရကီ၊ မွန်ဂိုသို့မဟုတ်ကိုရီးယားတို့ကိုပင်စုစည်းရန်ရည်ရွယ်သည့် Altaic ဘာသာစကားများသီအိုရီသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်။
ဂျပန်ဘာသာစကား - ရှုပ်ထွေးတဲ့ဘာသာစကား…ဒါမှမဟုတ်သိပ်မသိရလား။
တရုတ်၊ ရုရှား၊ အာရဗီ ... အနောက်တိုင်းသားများသည်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသောဘာသာစကားများအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီပြီးသူတို့၏ schema နှင့်ဝေးကွာကြသည်။ ထိုအခါ Mishima ၏ဘာသာစကားသည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။ သို့ဆိုလျှင်ဂျပန်ဘာသာစကားသည်အမှန်တကယ်သင်ယူရန်ခက်ခဲပါသလား။
အရေးအသားနှင့်ဝေါဟာရများ၏အတားအဆီးများအပြင်အင်ဒို - ဥရောပဘာသာစကားများနှင့်အနည်းငယ်မျှသာမတူပါကဂျပန်ဘာသာစကားသည် SOV (Subject-Object-Verb) ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ဂျပန်တစ် ဦး က“ ငါမုန့်ကိုစားသည်” ဟုဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်။ “ ငါမုန့်ကိုစားသည်” မဟုတ်ပါ (SVO ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အကြောင်းအရာ - ကြိယာ-အရာဝတ္ထု) ။ ဤအသုံးပြုမှုသည်ပြင်သစ်လူတစ် ဦး နှင့်အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိပုံရလျှင် SOV ဘာသာစကားများသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ SVO ဘာသာစကားများထက်များပြားသည်။ တူရကီ၊ ပါရှန်း၊ ဘစ်စကီနှင့်လက်တင်စကားများသည်ဆိုဗီယက်ဘာသာစကား၏အခြားဥပမာများဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဘာသာတွင်အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြသည့်အခါမကြာခဏချန်လှပ်ထားလေ့ရှိပြီး OV အမျိုးအစားရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်အဆုံးသတ်ရန်မှာမဆန်းပါ။
SOV, SVO, VSO ... ? ကမ္ဘာ့ထူးခြားမှု၏လေးပုံသုံးပုံပါသည့် SOV နှင့် SVO ဘာသာစကားများအပြင်အခြားသောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပေါင်းစပ်မှုများလည်းရှိသည်။
ကြိယာ - ဘာသာရပ် - အရာဝတ္ထုအမျိုးအစား ("I စားသောမုန့်ကိုစား") ၏ VSO ဘာသာစကားများ၊ ဥပမာအာရဗီသို့မဟုတ်အိုင်းရစ်ရှ်ဂယ်လီစ်; မာကြက်စ်ကဲ့သို့သောကြိယာ - ဘာသာရပ် - အမျိုးအစားအမျိုးအစား ("စားသောပေါင်မုန့်ကိုစား") ၏ VOS ဘာသာစကားများ၊ Object-Verb-Subject အမျိုးအစား OVS ("ပေါင်မုန့်ကိုငါစားသည်") ၏ Amerindian ဘာသာများကဲ့သို့; OSV ဘာသာရပ်များ - Object-Subject-Verb အမျိုးအစား ("ငါစားသောပေါင်မုန့်") သည်အလွန်ရှားပါးသည်။ Star Wars ရှိ Yoda ၏ဤကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်စကားပြောနည်းအတွက်!
ဂျပန်၏အခြားထူးခြားချက်များအနက်၊ ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောစကားလုံးများကိုသီးခြားဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဂျပန်သည် kanji 月 (လနှင့်သွယ်ဝိုက်လ) ကိုလ၏နံပါတ်နှင့်ဆက်စပ်ဖော်ပြသည်။
ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေးသောဘာသာစကား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ယူမှုတွင်လှုံ့ဆော်မှု၏အရေးကြီးမှုကိုလျစ်လျူမရှုသင့်ပေ။ ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီတွင်တိကျသောထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိပြီး၎င်းကိုပေးထားသောဟောပြောသူအတွက်လွယ်ကူစေရန်သို့မဟုတ်ခက်ခဲစေသည်။
တန်းတူ Tranquillus | ဇူလိုင်လ 14, 2021 | web ပေါ်မှာ |
ပေါ်တူဂီဘာသာစကားသင်ယူရန်၎င်း၏အသံထွက်ကိုအာရုံစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ပေါ်တူဂီအသံထွက်သည်ပြင်သစ်စကားပြောသူများအတွက်မလွယ်ကူကြောင်းသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အက္ခရာအများစုကိုပြင်သစ်ဘာသာနှင့်တူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်များစွာသော phonemes (စာလုံး၏အသံသို့မဟုတ်အက္ခရာများပေါင်းစပ်မှု) သည်လည်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ပေါ်တူဂီအသံထွက်သည်သင်သွားသည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်၊ သို့သော်ပေါ်တူဂီအသံထွက်ဤလမ်းညွှန်ကသင့်အားသင့်ကိုဖော်ပြရန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုနားလည်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ဘရာဇီးပေါ်တူဂီလာပြီးရှာဖွေပါ
ပေါ်တူဂီအသံထွက် - သင်ကောင်းစွာပြောဆိုရန်သင်လိုအပ်သည်အားလုံး ^
မိခင်ဘာသာစကားပြောဆိုသူသန်း ၂၃၀ ကျော်သည်ဤဘာသာစကားကိုတိုက်ကြီးတိုင်းတွင် (အာရှ၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့်အမေရိကရှိအများဆုံးနေရာများတွင်) ပြောဆိုသောကြောင့်ပေါ်တူဂီသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အများဆုံးပြောသောဘာသာစကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုလေ့လာလိုခြင်းသည်သဘာဝဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ်တူဂီဘာသာစကားပြောသောအများဆုံးဖြစ်သောဘရာဇီးလ်၏ပေါ်တူဂီအသံထွက်ကိုဤနေရာတွင်အာရုံစိုက်ပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပေါ်တူဂီသို့မဟုတ်အန်ဂိုလာသို့သွားလိုလျှင်အခြားနိုင်ငံများမှပေါ်တူဂီစကားပြောသူများကသင့်အားကောင်းစွာနားလည်လိမ့်မည်ဟုမစိုးရိမ်ပါနှင့်။
ပေါ်တူဂီဘယ်လိုအသံထွက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိချင်ရင်မင်းရဲ့အက္ခရာကိုအရင်လေ့လာရမယ်။ ဒီနေရာမှာပထမတစ်ချက်မှာအခက်အခဲမရှိဘူး၊ ငါတို့နဲ့လည်းအတူတူပဲ။ အက္ခရာ ၂၀ လုံးကိုပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်အသံထွက်သို့မဟုတ်တူညီသော“ အပြုအမူ” ရှိသည် - A, B, C, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, V, W , X, Y နှင့် Z. အက္ခရာများ K, W, X နှင့် Y ကိုမကြာသေးမီကပေါ်တူဂီအက္ခရာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်နိုင်ငံခြားစကားလုံးများတွင်မကြာခဏအသုံးပြုသောအက္ခရာများဖြစ်သည်။
သင့်အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုမြင်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပေါ်တူဂီစကားလုံးများကိုမှန်ကန်စွာဖတ်နိုင် / အသံထွက်နိုင်လိုလျှင်ပထမ ဦး ဆုံးသူတို့၏အသံထွက်ကိုအာရုံစိုက်ရမည်။
သတိထားပါ သင်ဒီမှာတွေ့ရမည့်အရာမှာယေဘုယျစည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။ သင်လာရောက်သည့်နေရာသို့မဟုတ်သင်မည်သူစကားပြောနေသည် (တိုင်းပြည်အတွင်း၌ပင်) ပေါ် မူတည်၍ ခြွင်းချက်သို့မဟုတ်အသံထွက်ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။
ပေါ်တူဂီအသံထွက် ^ မှာသရအက္ခရာများ
A, I နှင့် O အက္ခရာများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပြင်သစ်လိုအသံထွက်သည်။ သရသံအားလုံး၏အသံထွက်ကိုအောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။
A ကိုငှက်ပျောတွင်“ a” ဟုအသံထွက်သည်
အီးကို meta (ကြောက်ရွံ့ခြင်း) ကဲ့သို့“ é” ဟုအသံထွက်သည်။
ilha (ကျွန်း) တွင်“ i” ဟုအသံထွက်သည်။
O ကို open“ o” အဖြစ်၊ avo (အဖွား) ကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ porto (port) ကဲ့သို့ `ပိတ်“ ဟုလည်းခေါ်သည်။
U ကို rua (လမ်း) တွင်“ or” ဟုအသံထွက်သည်။
Y ကိုပြင်သစ်“ y” ဟုခေါ်သည် yoga (yoga) ဖြင့်အသံထွက်သည်။
သို့သော်သတိထားပါ၊ သို့သော် M (သို့) N နောက်မှလိုက်သောအခါသရအက္ခရာများသည်ပိုမိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသည် (E ကိုဥပမာအားဖြင့်“ è” ဟုအသံထွက်သည်) နှင့် nasalized ။ ဒီမှာငါတို့ပြင်သစ်စကားပြောသူများအတွက်အခက်အခဲမရှိပါ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း B, F, J, K, L, M, N, P, Q, V, W, X နှင့် Z သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြင်သစ်လိုအသံထွက်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်လိုပဲ H စာလုံးလည်းတိတ်ဆိတ်နေတယ်။
သို့သော်အက္ခရာအချို့သည်သူတို့၏အသံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ၏အသံထွက်ကိုကျွမ်းကျင်ရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုကောင်းစွာသိရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ပေါ်တူဂီအသံထွက်နဲ့အခက်အခဲမရှိတဲ့အက္ခရာတွေအကုန်လုံးကိုငါတို့တွေ့ပြီ။ အားစိုက်ထုတ်ဖို့လိုတဲ့အက္ခရာတွေကဒီမှာပါ။
အက္ခရာ C ^
သရ A၊ O နှင့် U တို့နောက်တွင် C အက္ခရာကို (café) သို့မဟုတ် casa (house) တွင်တွေ့ရသည်။
သရများ E နှင့် I တို့နောက်တွင် C အက္ခရာ (centro) တွင်ရှိကြောင်း / s / ဟုအသံထွက်သည်။
အခြေအနေမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူပြင်သစ်လိုအသံထွက်Çစာလုံးလည်းရှိသည်။ ဥပမာ - ပြင်သစ် (ပြင်သစ်)
အက္ခရာ: D ^
ဒီအက္ခရာကို“ dj” ဟုအသံထွက်သည်။ နောက်တွင် I (သို့မဟုတ်) dia (day) ကဲ့သို့စကားလုံးအဆုံးတွင်စာလုံး ၁ သို့မဟုတ် E အက္ခရာနောက်တွင်လိုက်သည်။
အက္ခရာ, G ^
အက္ခရာ C လိုပဲဒီစာဟာပြင်သစ်လိုအတိအကျပြုမူတယ် -
သရအက္ခရာ A, O နှင့် U တို့နောက်တွင် G သည်အက္ခရာ g (grafra (ပုလင်း) တွင်) / g / ဟုအသံထွက်သည်။
သရများ E နှင့် I တို့နောက်တွင် C ကို / / / girafa (giraffe) ဟုအသံထွက်သည်။
အက္ခရာ R ကို ^
ပေါ်တူဂီ R (ဘရာဇီးမှ) ကိုနည်းလမ်းသုံးမျိုးဖြင့်အသံထွက်သည်။
စကားလုံးတစ်လုံး၏အစတွင်၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ဂျာမန်ကဲ့သို့သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သော H ကဲ့သို့အသံထွက်သည်။
စာလုံးအလယ်၌ verde (အစိမ်းရောင်) ကဲ့သို့မကြာခဏလှိမ့်ထားသည်။
နှစ်ဆ ("RR") ကိုပြင်သစ် R - carro (ကား) သို့မဟုတ်သက်တမ်းကုန်သွားသော H - cachorro (ခွေး) အဖြစ်အသံထွက်သည်။
ဤအသံများ - ပြင်သစ် R မှလွဲ၍ ပြင်သစ်စကားပြောသူများအတွက်အလွန်သဘာဝမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အနည်းငယ်သောအလေ့အကျင့်ဖြင့်ကျွမ်းကျင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့်လေ့ကျင့်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်!
အက္ခရာ S ^
ပြင်သစ်လိုပဲ S မှာစာလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးအသံအမျိုးမျိုးရနိုင်တယ်။
စကားလုံးရဲ့အစမှာ (သို့) နှစ်ဆတိုးတဲ့အခါ sol (sun) လိုပဲ / s / လို့အသံထွက်တယ်။
သရသံနှစ်ခုကြားတွင် casa (house) ကဲ့သို့ / z / အသံထွက်သည်။
အက္ခရာ T ^
များသောအားဖြင့်ဤအက္ခရာကိုပြင်သစ်တီကဲ့သို့အသံထွက်သည်။ သို့သော်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီတွင် T ၏အက္ခရာ I နှင့်နောက်အက္ခရာတစ်ခု၏အဆုံးမှာအက္ခရာ I သို့မဟုတ် g အက္ခရာကို gente (gens) တွင်တွေ့ရသည်။
ပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့်သရအက္ခရာများကိုအလေးထားနိုင်သည်။ အသံထွက် (သင်္ချိုင်း၊ စူးရှ၊ circumflex, tilde) တွင်ပါသောစကားလုံးပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုအခြားအရာများတွင်အသုံးပြုသည်။
စာလုံးပေါင်းတူညီသောစကားလုံးနှစ်လုံးကိုခွဲခြားပါ။ pode (he can) နှင့်pôde (he could)
ယေဘူယျစည်းမျဉ်းကိုမလိုက်နာသည့်အခါဝဲဘယ်မှာရှိသလဲဖော်ပြပါ။ máquina (machine), útil (အသုံးဝင်သော)
သရအုပ်စုတစ်စု၏အသံထွက်ကိုညွှန်ပြ: cão (dog), mãe (မိခင်)
စကားလုံးနှစ်လုံးဆက်တိုက်ကြားကအက္ခရာနှစ်လုံး၏ကျုံ့မှုကိုအချက်ပြပါ။a+ aquela ⇒àquela (ထိုတစ်ခုသို့)၊a+a⇒ to (to ... )
အသံထွက်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုကိုမှတ်ထားပါ: pêlo (hair), pôr (to pose, to put)
ပေါ်တူဂီစကားသည်ပြင်သစ်ဘာသာစကားနှင့်မတူဘဲ ပို၍ တိုသောဘာသာစကားဖြစ်သည့်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ အသံထွက်အသံထွက်ထားသည့်နေရာကိုဖော်ပြရန်သာမကအသံကိုပြုပြင်ရန်အသံထွက်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ သင်္ချိုင်းသို့မဟုတ်စူးရှသောစကားလုံးပါသောသရအက္ခရာကို ပို၍ ပွင့်လင်းစွာအသံထွက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ accented letter O ကို“ ပန်းသီး” (ပွင့်လင်းပါးစပ်) တွင်avó (အဖွား) တွင်အိုကဲ့သို့အသံထွက်သည်။
သင်္ချိုင်းဝတ္ထုများကိုများသောအားဖြင့်a- နှင့်စသောစကားလုံးများဖြင့် prepositiona၏ကျုံ့ခြင်းအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်။ ဥပမာ aa သို့မဟုတ် aas ကိုရေးမည့်အစားà or às (à la) ကိုရေးသည်။
ပေါ်တူဂီအသံထွက် ^ အတွက် circumflex ဝဲ
ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့် circumflex အသံထွက်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ပြင်သစ်စကားလုံးကဲ့သို့တူညီသည်။ ၎င်းသည်သယ်ဆောင်သည့်သရသံ၏အသံကိုပြုပြင်သည်။ ထို့ကြောင့်အသံကိုပါးစပ်ဖြင့်ပြန်ဖွင့်ထားသည်။
ပေါ်တူဂီအသံထွက် ^ tilde
အသံများကိုပြုပြင်ရန် tilde ကိုသရသံအချို့နှင့်အသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်သယ်ဆောင်သည့်သရအက္ခရာသည်နှာသီးဖြစ်လာသည်။
ပြင်သစ်နှင့်အခြားဆင်တူချက်တစ်ခုမှာပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်အသံထွက်ပြောင်းသည့်အက္ခရာနှစ်လုံးသုံးလုံးပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်စုများကိုပေါ်တူဂီဘာသာဖြင့်မည်သို့အသံထွက်သလဲ -
CH> ပြင်သစ်လိုပဲ C နှင့် H အက္ခရာပေါင်းစပ်မှုကပေါ်တူဂီစကားနဲ့အသံ၊ ʃ /၊ ချက်တင် (သို့) chamar ကိုပေးသည်။
LH> ဤစာလုံးအုပ်စုကိုʎ / သို့မဟုတ်ပြင်သစ်သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာဖြင့်“ ill-” ဟုအသံထွက်သည်။ filho (son)
NH> ဤအက္ခရာအုပ်စုကိုအသံထွက်ဟု / ɲ / or“ gn”: amanhã (tomorrow)
ÇC> ဒီအက္ခရာပေါင်းစပ်မှုအသံထွက်သည် / ks /
ဤအက္ခရာပေါင်းစပ်မှုများသည်ပြင်သစ်အသံများဖြစ်သော -on, -an, -in ကဲ့သို့နှာခေါင်းသံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤအသံများ၏ပေါ်တူဂီအသံထွက်လည်းအလွန်ဆင်တူသည်!
>E> ဤအက္ခရာအုပ်စုသည်အသံ /a/ မှစတင်သည်၊ ထို့နောက်“ in” ဟူသောအသံဆီသို့လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသည် - mãe (မိခင်)
ÃO> ဤပေါင်းစပ်ထားသောစာလုံးများသည်အသံမှ /a/ မှစပြီး“ on” ဟူသောအသံဆီသို့လျင်မြန်စွာရွေ့လျားသည်။ pão (နာကျင်မှု)
>E> အသံထွက်ရန်ခက်ခဲသည်၊ ၎င်းသည်အသံ / o / ဖြင့်စတင်ပြီးလျင်မြန်စွာ 'shopping' ၏ '-ing' အသံသို့ ဦး တည်သွားသည်။ põe (put / pose) ။
ကောင်းမွန်စွာအသံထွက်ရန်၊ အနားယူရန်၊ မေးရိုးကိုဆန့်ရန်၊ သင်ကျယ်လောင်သောအသံထုတ်လွှင့်ပြီးနောက်နောက်တစ်ခါ ထပ်၍ အသံထွက်ချဲ့ရန်။ ဤအရာကိုတစ်နေ့လျှင် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အချိန်ယူခြင်းဖြင့်တိုးတက်မှုကိုလျင်မြန်စွာမြင်တွေ့နိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာမိမိကိုယ်ကိုနားလည်စေရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအသံထွက်ကိုမရရန်ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ သင်လေ့ကျင့်လေလေ၊ စကားပြောလေလေ၊ သင်၏လေသံကိုလည်းတိုးတက်လာလေဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားဘာသာစကား (မိခင်ဘာသာစကား) ဖြင့်ပြောဆိုခြင်းနှင့်အသံသေးငယ်ခြင်းရှိခြင်းကိုဒေသခံများကအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။
သင်သည်ဤဆောင်းပါးကိုနှစ်သက်ပြီးဘရာဇီးပေါ်တူဂီနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဗဟုသုတကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေလိုပါကသင့်အားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကြံပြုချက်အချို့ကိုဒီမှာတွေ့နိုင်သည်
သတင်းကောင်းပထမ: သင့်ကိုကူညီပေးနိုင်သည်ဒုတိယသတင်းကောင်း။ ယခုတွင်သင်သည်အခမဲ့စတင်နိုင်သည်။ သင်၏အခမဲ့စမ်းချောင်းကိုဖွင့်ပြီးပေါ်တူဂီဘာသာစကားကို ၁၅ ရက်ကြာလေ့လာရန်ဤထိရောက်သောနည်းလမ်းကိုနှစ်သက်သည်။
ဝေါဟာရကိုသင်ယူရန်အတွက်ကဒ်ပြားများ၊ စာတန်းထိုး၊ အသံစာအုပ်များနှင့်သင့်အဆင့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်မူရင်းဗားရှင်းရှိဗီဒီယိုများ - MosaLingua Premium (Web & Mobile) သည်ဤအရာအားလုံးကိုသင့်အားရယူခွင့်ပေးသည်။ ချက်ချင်းစတင်ပါ (၎င်းသည်အခမဲ့နှင့်စွန့်စားမှုကင်းသော) ။
တန်းတူ Tranquillus | ဇူလိုင်လ 13, 2021 | web ပေါ်မှာ |
ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုရန်သင်ယူခြင်းသည်စက်ဘီးစီးရန်သင်ယူခြင်းနှင့်မတူပါ။ ၎င်းကိုမေ့သွားနိုင်သည်။ ရှိတ်စပီးယားရဲ့ဘာသာစကားကိုလေ့ကျင့်ဖို့မကြာခဏအခွင့်အရေးမရရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုအဆင့်တွေကိုထိန်းသိမ်းမလဲ။ သငျသညျသဲကန္တာရကျွန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသော metropolis တွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ, အင်္ဂလိပ်လိုကောင်းသောအဆင့်အထိတက်နိုင်ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများစာရင်းကိုအတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
ဤအကြံပြုချက်များအားလုံးသည်သင်၏ဘဝတစ်ချိန်ချိန်တွင်အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ခဲ့သည်ဟုယူဆသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ သို့မဟုတ်အတန်အသင့်ရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းအရာဖြစ်သည့်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအတွင်း၌သင်၏စကားလုံးများကိုရှာဖွေခြင်းမရှိဘဲသူ့ကိုတုံ့ပြန်ရန်လုံလောက်သောအဆင်ပြေသည်။ သင်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားနိုင်လျှင်အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်သည်။ သင်ဟာပါဝင်မှုအားလုံး၏အင်္ဂလိပ်အမည်များကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သောခရမ်းချဉ်သီး၊ zucchini၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်သီး၊ ဆား၊
၁။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောမဂ္ဂဇင်း / သတင်းလွှာ / သတင်းစာကိုစာရင်းသွင်းပါ
ပြင်သစ်ကျောင်းသားများကိုသူတို့၏ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသို့တက်ရောက်စဉ်တိုင်းမဂ္ဂဇင်းကိုစာရင်းပေးသွင်းရန်အကြံပေးလေ့ရှိသည်။ ကောင်းတဲ့အကြံပါပဲ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမကြာခဏအချိန်မရှိခြင်း, သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒမရှိခြင်းများအတွက်အပတ်စဉ်ဖတ်ရှုခြင်းစွန့်လွှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အချိန်သည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊
ဒီတော့အစားအစာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း၊ ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဘဏ္financeာရေးလား၊ cryptocurrency လားဆိုတာမဂ္ဂဇင်း၊ သတင်းစာတခုခု (သို့) သင့်ကိုတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်ရိုးရိုးသတင်းလွှာတစ်ခုမှာစာရင်းသွင်းပါ။ သင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကိုအလွန်အကျွံမကြိုးစားဘဲထိန်းသိမ်းထားရုံသာမကသင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘ ၀ တွင်အသုံးဝင်မည့်နည်းပညာဝေါဟာရများကိုစုဆောင်းထားလိမ့်မည်။
ပြောတာကလွယ်လွယ်ပြောရရင်အင်္ဂလိပ်စပီကာတွေအနားမှာရှိနေခြင်းဟာသင်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်တွေ့ဆုံရန်အတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်၊ Couchsurfing မှတစ်ဆင့်ပြည့်စုံသောသူစိမ်းများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်သည်။
၃။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောသောနိုင်ငံတွင် WHV သို့ခရီးသွား / Expatriate / ယူပါ
အသက် (၃၅) နှစ်အောက်လူငယ်များသည် Workday အားလပ်ရက်အစီအစဉ် (WHP) မှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည် - ၎င်းသည်သူတို့အားနိုင်ငံခြားသို့သွားရန်နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောသဘောတူညီချက်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Francophones များသည်နိုင်ငံ ၁၆ ခုတွင်သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ နယူးဇီလန်စသည်တို့တွင်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒိုင်ယာရီ (သို့မဟုတ်ဒိုင်ယာရီ) ကိုသိမ်းထားသူများသည်တစ်လစာသာလျှင်ပင်၎င်းတို့၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်၎င်းတို့၏မှတ်စုများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာရေးသားရမည်။
၅။ မှတ်စုတိုများ၊ စျေး ၀ ယ်စာရင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်စာရင်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးပါ
ယခင်အကြံပေးချက်ကဲ့သို့ပင်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမှာရှိတ်စပီးယား၏နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများကို - စျေးဝယ်စာရင်း၊ လုပ်ရန်စာရင်း၊ လုပ်ရန်စာရင်း၊ လုပ်ရန်စာရင်းများဖြစ်သည်။ စနေ၊ စနေ၊ ဒီလှည့်ကွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ratatouille စာရွက်ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြဖို့သင်မလိုတော့ပါ။
Le Monde ကိုနေ့စဉ်ဖတ်မည့်အစားသင်၏စာဖတ်ခြင်းကိုနယူးယောက်တိုင်းမ်၊ နယူးယောက်တိုင်းမ်၊ ပိုလီတိုသို့မဟုတ်ဂါးဒီးယန်းစသည့်အဓိကအင်္ဂလိပ်စာစောင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါလေ။ သင်ဟာဝေါဟာရနှင့်အရသာစကားအသုံးအနှုန်းများကိုစုဆောင်းရုံတင်မကဘဲ၊ သင်ကသတင်းအပေါ်ပြင်သစ်မီဒီယာ၏ Franco-French အကြည့်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိသည်လိမ့်မယ်
Podcasts တွေဟာဒေါသကြီးတယ်၊ ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းတို့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုနားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံး podcasts တွေကိုစာရင်းပြုစုထားတယ်။
သင်၏ဖုန်း၊ ကွန်ပြူတာ / Facebook အကောင့်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါ
သင်၏ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ သင်၏ Facebook အကောင့်ပြောင်းလဲခြင်း (သို့) ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်သင့်အားအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဆက်နေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤလှည့်ကွက်တစ်ခုတည်းကမူ၎င်း၏အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်မလုံလောက်ပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးသတိပြုပါ - ဤ Podcasts များကိုနားထောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရေဒီယိုနားထောင်ခြင်း၊ တိုက်ရိုက်၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သင့်ရေဒီယိုတို့မှနားထောင်ခြင်းသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကို (သင်တစ်ချိန်တည်း၌အခြားအရာများကိုလုပ်နိုင်သောကြောင့်) နှင့်တက်ကြွစွာ (သင်အာရုံစိုက်နေပါက) တက်ကြွစွာထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုကိုရိုးရှင်းသောနောက်ခံအသံအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းထက်ပြောဆိုခြင်းကိုနားထောင်ရန်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ သငျသညျအရာအားလုံးနားမလည်လျှင် (သို့မဟုတ်ပထမ ဦး ဆုံးမှာအများကြီးပင်), ဒါကperfectlyုံပုံမှန်။ လတွေကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ သင်နားလည်ဖို့အားစိုက်ထုတ်မှုလျော့နည်းလာပြီးသင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
၁၂ ။ Youtube လိုင်းများ၊ FB စာမျက်နှာများ၊ Instagram နှင့် Twitter အကောင့်များသို့စာရင်းသွင်းပါ
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆောင်းပါးကိုအကောင်းဆုံး Youtube လိုင်းများပေါ်တွင်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
Penpal သို့မဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသတင်းထောက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေခြင်းသည်အင်တာနက်နှင့်အလွန်လွယ်ကူလာသည်။ အထူးပြုလုပ်ထားသောဆိုဒ်များမှာ PenPal World သို့မဟုတ် Mylanguageexchange များရှိသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်“ အမှန်တကယ်” penpal ကိုလိုချင်လျှင်၊ စာတိုက်မှပေးပို့သောစက္ကူစာရွက်အစစ်အမှန်ကိုဖလှယ်မည့်သူအားသင်အစားထိုးထားသောနိုင်ငံတကာ Pen သူငယ်ချင်းအဖွဲ့အစည်းသို့သွားသင့်သည်။
14. Couchsurfing နှင့်အတူသူစိမ်း Hosting
Couchsurfing ၏နိယာမသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လိုချင်သမျှနေသမျှအိမ်တွင်ပြည့်ဝသောသူစိမ်းများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံသည်။ ဤလည်ပတ်မှုများသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိလူများနှင့်အတူအစာစားခြင်း၊ လှုပ်ရှားခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ ခဏခြင်းဖလှယ်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။
François Mitterand ကဲ့သို့ပင်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုနှလုံးသားဖြင့်လေ့လာခြင်းသည်သင်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးခြင်းသည် ပို၍ ပင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ဖတ်ခြင်းသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးတည်းဖြင့်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်များကိုဖတ်ခြင်းသည် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်၊
သင့်တွင်ရွက်ပေါက်နေသောစာရေးဆရာတစ် ဦး ၏စိတ်ဝိညာဉ်ရှိပါကအင်္ဂလိပ်လိုရေးသောဇာတ်လမ်းတိုများကိုရေးခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးသင်၏အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုသတိမပြုပါနှင့်။ အရေးကြီးသောအရာသည်ပုံပြင်များကိုတီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။
စားဖိုမှူးတစ် ဦး ၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ရှိသူများအဘို့, အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားစာရွက်စာအုပ်တွေမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့ဆည်းပူးခြင်းနှင့်ဗတ္တိဇံသည်လူတစ် ဦး ၏အင်္ဂလိပ်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွန်ထိရောက်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အလွယ်ကူဆုံးအကြံဥာဏ်သည်သီချင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်သတိထားပါ - သီချင်းကိုရေချိုးခန်းထဲမှာတွန်းထုတ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲစကားလုံးများကိုအာရုံစိုက်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်း၊ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ခြင်း၊ သီချင်းများကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့ကိုမှန်မှန်သီဆိုခြင်း၊ အနုပညာရှင်များရေးသားသောကျမ်းများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာကိုကျွမ်းကျင်စွာအဆင့်မြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားရန်မခက်ခဲပါ။
တန်းတူ Tranquillus | ဇူလိုင်လ 5, 2021 | web ပေါ်မှာ |
သင်၏ CV ကိုအင်္ဂလိပ်လိုမည်သို့ရေးနိုင်သနည်း။ ကျောင်းစာသင်နှစ်နှင့်နှစ်သစ်စတင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကျောင်းသားများသည်ပြည်ပတွင်အလုပ်သင်များရှာဖွေနေကြသည် (သို့) Erasmus နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေရှာဖွေရန်ထူးဆန်းသည့်အလုပ်များ။
ဤနေရာတွင်သင့်အားအကောင်းဆုံးအင်္ဂလိပ်စာဖြင့်ရေးသားရန်ကူညီမည့်အကြံပြုချက်များ (၁၄) ခုထက်မကပါ။ ပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာ CVs များအကြားရှိနိုင်သည့်အဓိကကွဲပြားခြားနားမှု (၆) ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး စွာနှိုင်းယှဉ်ပြီးမော်ဒယ်နှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောယေဘူယျအကြံပြုချက် ၈ ခုနှင့်နိဂုံးချုပ်ပါမည်။
ပြင်သစ် CV နှင့်အင်္ဂလိပ် CV တို့အဓိကကွာခြားချက် ၆ ခု
၎င်းသည်ပြင်သစ် CV နှင့်အင်္ဂလိပ် CV တို့အဓိကကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ သင်၏ CV ထိပ်ဆုံးရှိမိတ်ဆက်စာပိုဒ်တွင်သင်၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အကျဉ်းချုပ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
ဤသည်မှာသင်၏ CV ၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အရေးအပါဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စုဆောင်းသူကဖတ်ရှုမည့်ပထမဆုံး (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ်ခုတည်းသော) အရာဖြစ်သည်။ သင်၏ရပ်တည်ချက်ကိုပြသရန်၊ သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုပြသရန်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအလုပ်နှင့်အဖွဲ့အတွင်းသို့တင်ပြရန်နှင့်သင်၏အလားအလာကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုသည်။ စာကြောင်းအားလုံးနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဖြင့်ဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်သောအိုင်တီအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအတွေ့အကြုံစီမံကိန်းမန်နေဂျာ။ ကျွမ်းကျင်မှုတွင်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွေးခေါ်မှုနှင့်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာပြproblemနာဖြေရှင်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဖောက်သည်များ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးတို့အတွက်သုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုတိုးတက်စေရန်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသဘောတရားများကိုအိုင်တီတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပြင်သစ်နှင့်မတူဘဲ Anglo-Saxon နိုင်ငံများသည်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင့်ဘွဲ့များထက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုသာအဓိကထားကြသည်။
ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသည်သင်၏ CV ၏အကြီးမားဆုံးအပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အလုပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအမြဲတမ်းပုံစံဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ဒီအပိုင်းမှာအောက်ပါတွေပါ ၀ င်သင့်တယ် -
သင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီအမည်သင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်နေရာသင်အလုပ်ခန့်ထားသည့်ရက်စွဲသင်၏အခန်းကဏ္, အပြင်အလုပ်အကိုင်ဖော်ပြချက်၏တရားဝင်ခေါင်းစဉ်၊ အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကြိယာများနှင့်အဓိကအချက်အလက်များပါဝင်သောစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုများ
ထို့ကြောင့်၊ သင်၏ထင်ရှားသောအချက်အလက်များကိုသင်၏တိကျမှန်ကန်သောအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အရောင်း ၀ ယ်သူ ၈၃% တိုးလာသောအခါရောင်းသူ၊ စာရွက်အဖြူရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ယခင်အလုပ်များကာလအတွင်းသင်ရိုက်ကူးခဲ့ဖူးသည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုအလျှော့မပေးမိစေရန်သတိထားပါ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် CVs ၏အခြားအထူးအချက်တစ်ခုမှာပျော့ပျောင်းသောစွမ်းရည်၏အရေးပါမှုပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊
သတိပေးချက် - ဝန်ထမ်းစုဆောင်းသူအားသင့်အားအလားအလာရှိသောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်“ Leadership” ထားရန်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏ CV တွင်သင်ထည့်လိုက်သောအရည်အချင်းအားလုံးသည်အောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံဖြင့်သက်သေပြနိုင်ရမည်။ မင်းဟာတီထွင်ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ရှိတယ်လို့ပြောရင်၊ အင်တာဗျူးနေတဲ့အချိန်မှာ၊ သင်ဟာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတခုကိုခေါ်ယူဖို့သင့်ကိုခေါ်ယူလိမ့်မယ်။
ဆက်သွယ်ရေးအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်း - မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်မှု - ဦး ဆောင်မှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ဝတ္တရားပြPနာဖြေရှင်းခြင်း / ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုဖိအားအောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း
ပြင်သစ် CV နှင့်မတူသည်မှာအင်္ဂလိပ် CV သည်“ ပညာရေး” အပိုင်းကို CV ၏အောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးထားလိမ့်မည်။ မကြာခဏဆိုသလိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်သူ၏လတ်တလောဒီပလိုမာသို့မဟုတ်အထင်ရှားဆုံးဒီပလိုမာကိုရရှိရန်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ဘွဲ့ယူခဲ့သောတက္ကသိုလ်နှင့်သင်၏အမြင့်ဆုံးဘွဲ့အမည်ကိုသာတင်ပါ။
သင့်တွင်မဟာဘွဲ့ရှိပါက၊ သင်၏ဘွဲ့ကိုသင်မလိုအပ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားလျှင်စသဖြင့်၊ အကယ်၍ သင့်အားမသက်ဆိုင်ပါကဥပမာအားဖြင့်သင်အားဖြည့်စွက်နယ်ပယ်နှစ်ခုတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပါက
ယေဘုယျအားဖြင့် CVs တွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဓါတ်ပုံများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရှာဖွေခြင်းသည်ဖြစ်ခဲသည်။ သို့သော်၎င်းသည်စားပွဲထိုးသို့မဟုတ်အိမ်ရှင်ကဲ့သို့သောအလုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် CVs ၏အခြားထူးခြားချက်မှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွမ်းကျင်သောထောက်ခံချက်များရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ “ အတွေ့အကြုံ” ကဏ္inတွင်သင်၏အရည်အချင်းနှင့်သင်၏စရိုက်ကိုအတည်ပြုရန်သဘောတူမည့်သူတစ် ဦး ၏အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ရန်သင့်တော်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်သင်၏ယခင်သူဌေး၊ ယခင်မန်နေဂျာ၊ တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ၊ သင်၏အားကစားနည်းပြ၊ သင်၏အနာဂတ်အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ CV နှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏အမည်နှင့်အဆက်အသွယ်များကိုဖော်ပြပြီးသောဤလူများအားအသိပေးရန်မမေ့ပါနှင့်။ သို့မဟုတ်လျှင်သင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်ဖွယ်များဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
မပြောင်းနိုင်သောအရာ - သင်၏ CV ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးရန်အတွက်အကြံပြုချက်များ ၈
ဘာတွေပြောင်းလဲနေတာလဲ။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံး! ကောင်းသော CV ကိုအင်္ဂလိပ်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်ဘာသာအတွက်ရေးရန်ယေဘူယျအကြံပြုချက်များ။
ဖတ်ရန်လွယ်ကူသော၊ ဖန်စီ။ မရ၊ ၁၁pt အောက်မကျသောစာလုံးကိုသုံးပါ။ အနည်းဆုံးစင်တီမီတာ၏အနားသတ်ကိုထည့်ပါ။ သင်၏ CV ၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများအကြားအဖြူကွက်အလုံအလောက်ထားရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အလှဆင်မှုများဖြင့် CV ။ အရောင်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသတိနှင့်ထားပါ။ La Poste မှလျှောက်လွှာများပို့လျှင်သို့မဟုတ်သင်၏ CV ကိုတင်ပါက၎င်းသည် 11g / m² grammage ဖြင့်ကောင်းသောစာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ CV ကို PDF format နဲ့မပို့ပါနဲ့။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့မင်ကိုသုံးပါ။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုစကင်ဖတ်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးလေ့ရှိပြီးထိုဆော့ဖ်ဝဲသည် PDF များကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အကယ်၍ သင်ပညာရေးသို့မဟုတ်ဆေးသုတေသနတွင်မဟုတ်လျှင်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သည်စာမျက်နှာတစ်ထောင့်နှစ်နှစ်ထက်မပိုစေရ။ သင်သည်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးအတွက်လျှောက်ထားခြင်းမရှိပါကသင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အတွက်စာမျက်နှာတစ်ခုသာကပ်ပါ။ ဒါဟာပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှု၏အချို့သောဝိညာဉျကိုပြသရန်အရေးကြီးပါသည်။
မင်းရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲ။ - အခြားဘာသာစကားဖြင့်တွေးတောခြင်း [ဗွီဒီယို]
တန်းတူ Tranquillus | ဇွန်လ 30, 2021 | web ပေါ်မှာ |
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကိုသင်ယူရာတွင်မိမိ၏မိခင်ဘာသာစကားမဟုတ်သောအခြားဘာသာစကားဖြင့်တွေးခြင်းသည်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အရင်ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုလျှင်၊ သင်ဟာသင့်ရဲ့ ဦး တည်ချက်မှအရာအားလုံးကို၊ သင့်ရဲ့ target language မှသင့်မိခင်ဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ဆိုလိုကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ ဤသည်လျင်မြန်စွာအချိန်ယူ, အလွန်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်! ဒါကြောင့်သင်ဒီလိုလုပ်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲ။ Abbe သည်သင်၏အဓိကဘာသာစကားဖြင့်စတင်တွေးတောနိုင်ရန်လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းအချို့ကိုမျှဝေသည်။ မင်းခေါင်းထဲမှာဘာသာပြန်တာကိုဘယ်လိုရပ်တန့်ရမလဲဆိုတာသူမအကြံပေးလိမ့်မယ်။
တန်းတူ Tranquillus | AVR 12, 2021 | web ပေါ်မှာ |
ကျွန်တော်တို့ဟာအနာဂတ်ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါတရုတ်၊ တစ်ခါတစ်ရံရုရှား၊ အာရဗီစကားလုံးများမကြာခဏမေ့သွားသောဘာသာစကား သူမသို့သော်ခေါင်းစဉ်အတွက်အလေးအနက်ပြိုင်ဘက်သည်မဟုတ်လော ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအပြောဆုံးသောဘာသာစကား ၅ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သိပ္ပံ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာတရားတို့၏ဘာသာစကား၊ အာရဗီဘာသာစကားသည်ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ယင်း၏ဓလေ့ထုံးစံများကိုသစ္စာရှိစွာဖြင့်အာရပ်ဘာသာစကားသည် ဆက်လက်၍ ခရီးသွားလာခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုကြွယ်ဝစေခြင်းနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ရာများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ပကတိအာရဗစ်၊ မရေမတွက်နိုင်သောစကားများနှင့် ၄ င်း၏တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်မှတ်သားနိုင်သောအက္ခရာအကြားတွင်ဤတွေ့ရခဲသောဘာသာစကား၏အနှစ်သာရကိုမည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်မည်နည်း။ Babbel သည်သင့်အားလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ချလိုက်သည်။
အာရဗီဘာသာစကားသည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၄ နိုင်ငံ၏ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂ၏တရားဝင်ဘာသာစကား ၆ ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအာရပ်အဖွဲ့ချုပ်၏ 24 ပြည်နယ်များ, ပေါင်း Eritrea နှင့်ချဒ်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအာရပ်စကားပြောသောနိုင်ငံများ၏ထက်ဝက်သည်အာဖရိကတိုက်တွင်ရှိသည် (အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ကိုမိုရိုစ်၊ ဂျီဘူတီ၊ အီဂျစ်၊ အီရီထရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ မော်ရိုကို၊ မော်ရီတေးနီးယား၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန်၊ ချဒ်နှင့်တူနီးရှား) ။ အခြားတစ်ဝက်မှာအာရှ (ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဘာရိန်း၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ အီရတ်၊ ဂျော်ဒန်၊ ကူဝိတ်၊ လက်ဘနွန်၊ အိုမန်၊ ပါလက်စတိုင်း၊ ကာတာ၊ ဆီးရီးယားနှင့်ယီမင်) တွင်တည်ရှိသည်။
အာရဗီ၊ တူရကီ၊ အာရပ်စကားပြောသူအများစုမှာမူဆလင်များဖြစ်သည်။ အာရဘီသည်ကိုရမ်ဘာသာ၏ဘာသာစကားဖြစ်သည့်အများစုမှာစုပေါင်းပေါင်းစည်းခြင်းကအာရဗီဘာသာစကားကိုအစ္စလာမ်နှင့်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးမွတ်စလင်နိုင်ငံမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအာရပ်စကားမဟုတ်ပါ။ အာရဗီသည်ဆီးမိုက်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ သူမသည် Altaic ဘာသာစကားအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သည့်တူရကီနှင့်မိသားစုအဆက်အသွယ်မရှိပါ။ အီရန်၏ပထမဆုံးဘာသာစကားဖြစ်သောပါရှန်း (သို့) ဖာစီသည်အာရဗီနှင့်မပတ်သက်ပါ။ ၎င်းသည်ပြင်သစ်လိုအင်ဒို - ဥရောပဘာသာစကားပါ။ ထိုနည်းတူစွာ၊ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်အဓိကဘာသာစကားနှစ်မျိုးမှာအီရာဘာသာစကားများဖြစ်သော Dari နှင့် Pashto ။ အာရဗီဘာသာစကားကျင့်သုံးမှုသည်ထိုဒေသရှိလူနည်းစုလူမျိုးစုတွင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအတွက်သိမ်းထားသည်။
Babbel တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာအရေးအသားစနစ်များကိုဖျက်သိမ်းရန်လေ့ရှိသည်။ စိရယ်လ်အက္ခရာသည်နှစ်ရက်ကျော်သင်ကြားရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Alphabet World Tour သည်ကော့ကေးဆပ်မှကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်သို့ပို့ဆောင်ပြီးဖြစ်သည်။ အာရဗီအက္ခရာအရ…၎င်းသည်လက်တင်အက္ခရာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သောသဘောအတိုင်းအက္ခရာမဟုတ်ပါ! Abjad သို့မဟုတ်ဗျည်းအက္ခရာဟုခေါ်သောအာရဗီအက္ခရာသည်ဗျည်းများကိုသာမှတ်သားသည်။ ၎င်းကိုလက်ျာမှလက်ဝဲမှရေးသားပြီးဖတ်ပြီးစာ ၂၈ လုံးရှိသည်။
ဤအရေးအသားစနစ်ကိုအခြားဘာသာစကားများဖြစ်သောအထူးသဖြင့်ပါးရှား၊ ကဒ်ဒူနှင့်အူဒူဘာသာစကားများဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အေဒီ ၁၀၀၀ ကတည်းက၎င်းကိုဥဂါးရ်များကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၂၈ ခုနှစ်အထိလက်တင်အက္ခရာကိုအသုံးပြုပြီးတူရကီဘာသာစကားဖြင့်ကူးရေးသောကူးယူချက်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အာရဗီသည် diglossia ၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ Diglossia သည်ဘာသာစကားကိုဒေသဆိုင်ရာမျိုးကွဲများစွာအဖြစ်ခွဲခြားသည်ဆိုသောအချက်သည်တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းတို့အကြားနားလည်မှုမရှိပါ။ အာရဗစ်သည်ဘာသာစကားတစ်ခုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဖြစ်မှန်နှစ်ခုကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
Literal Arabic ဆိုတာ standardized language ကိုပေးတဲ့နာမည်ပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဘာသာစကားသည်အာရဗီစကားပြောနိုင်ငံများ၏ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကုရ်အာန်၊ မီဒီယာနှင့်တိကျသောသဒ်ဒါ၌လည်းတွေ့ရသည်။ ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများတွင်၎င်းသည်တရား ၀ င်နှင့်တရားဝင်ဆက်သွယ်ရေးတွင်လွှမ်းမိုးသည်။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မည်သူမျှမိခင်ဘာသာစကားအဖြစ်ဂန္ထဝင်အာရဘီဘာသာစကားမရှိကြပါ။ Dialectal Arabic သည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်နှုတ်ဖြင့်သုံးသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နယ်မြေတစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။
အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော diglossia? ၎င်းသည်သမိုင်း၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးတိုးတက်မှုများ၏အသီးအပွင့်ဖြစ်သည်။ သက်ရှိဘာသာစကားအားလုံးကဲ့သို့ပင်အာရဗီသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲသွားသည်။ ၇ ရာစုမှစပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာဘာသာစကားဖြစ်လာသည့်ကဗျာဆန်သောဘာသာစကားသည်territoryရာမနယ်မြေကိုလွှမ်းမိုးမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသေးသောစကားဟောင်းများသည်အာရဗီနှင့်ရောစပ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ အီဂျစ်တွင်ကော့ပ်တစ်၊ မက်ဂရက်ဘ်မှဘာဘာ၊ ဆီးရီးယားမှအာရမိတ်အရ…အာရဗီဘာသာစကားသည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုတို့၏သမိုင်းဖြစ်သည်။ အာရဗီ၏အဓိကဘာသာစကားများကိုကြည့်ကြပါစို့။
အာရဘာသာစကား၏ဘာသာဂုဏ်ထူးအများအပြားအဆင့်ဆင့်အပေါ်လုပ်နေကြသည်။ ဘာသာဗေဒပညာရှင်များသည်ဒေသအလိုက်ချဉ်းကပ်နည်းကို ဦး စားပေးကြသည်။ အရှေ့အာရပ်ဆန့်ကျင်အဖြစ်အနောက်တိုင်းအာရပ်ရှိလိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်း၏ဒေသများ၌ပင်ကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုဘာသာစကားများအနေဖြင့်အသုံးချခြင်းသည်ဘာသာစကားများ၏အသုံးအနှုန်းအတွက်ဖြစ်သည်။
အနောက်တိုင်းအာရဗီ (Maghrebian Arabic) သည်အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ လစ်ဗျား၊ မော်ရိုကို၊ မော်ရီတေးနီးယားနှင့်တူနီးရှားတို့တွင်ဘာသာစကားအမျိုးအစားများကိုနယ်မြေများ၏အက္ခရာစဉ်အတိုင်းသတ်မှတ်သည်။
- Egyptian Arabic;
- Mesopotamian Arabic သည်အဓိကအားဖြင့်အီရတ်၊
- ဆီးရီးယား၊ လက်ဘနွန်၊ ပါလက်စတိုင်းနှင့်ဂျော်ဒန်နိုင်ငံရှိ Levantine Arabic၊
- Peninsular Arabic, အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏အခြားအာရစကားပြောပြည်နယ်များမှဘုံ။
သန်း ၄၀ ခန့်သောမိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သောအယ်လ်ဂျီးရီးယားအာရ်တွင်သရအက္ခရာအချို့ပျောက်ကွယ်လေ့ရှိသည်။ ဥပမာ - سماء (s'ama, sky) ဟူသောစကားလုံးကို s'ma ဟုအသံထွက်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်, ဆီးရီးယားအာရဗီအသံထွက်အတွက်ပကတိအာရကိုပိုမိုသစ္စာစောင့်သိနေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ပုံဥပမာ - كيفاش؟ (kifach, ဘယ်လို?), وقتاش؟ (weqtach, качан?) နှင့် algerian Arabic နှင့် Moroccan Arabic ရှိ interrogative words များ၏အဆုံးတွင် -ach ကိုထည့်သွင်းလိုသည်။ လက်ဘနွန်သို့မဟုတ်အီဂျစ်တွင်ပြောင်းပြန်ကိုအသံဟုအသံထွက်သည်။
အာရဗီဘာသာစကား၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုသည်အဝေးကြီးမှသက်သေပြနိုင်သည့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များ၌ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အာရဗီနှင့်အင်္ဂလိပ်စာ (Frenglish ကဲ့သို့ inglizi)၊ အာရနှင့်လွယ်ကူသောစကားများ။ ပထမဆဲလ်ဖုန်းများတွင်အာရပ်ကီးဘုတ်များမရှိခြင်းကြောင့်ပျောက်ဆုံးနေသောအက္ခရာများကိုနံပါတ်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ “”” သည် 1990 ဖြစ်သွားသည်၊ “ ع” သည် ၃ ဖြစ်လာသည်၊ သို့မဟုတ်ححသည် ၇ ဖြစ်လာသည်။ ယနေ့ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်လူမှုကွန်ယက်များတွင်တွေ့ရဆဲဖြစ်သည်။
တန်းတူ Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 16, 2021 | web ပေါ်မှာ |
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောတတ်ကြသည်ကိုသင်သိပါသလား။ ပထမတစ်ချက်မှာအံ့သြဖွယ်ကောင်းပုံရသည့်ဤကိန်းဂဏန်းသည်တိုရွန်တိုရှိ York တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာရှင်နှင့်ကနေဒါပါမောက္ခ Ellen Bialystok ကပြုလုပ်သောဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောခြင်းဆိုင်ရာသုတေသနတွင်မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
ကလေးသူငယ်များတွင်သိမြင်မှုနှင့်ဘာသာစကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအထူးပြုမှုဖြင့် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်သူ၏ပါရဂူဘွဲ့ကိုရရှိပြီးနောက်သူ၏သုတေသနသည်ကလေးဘဝ မှစ၍ အမြင့်ဆုံးသောခေတ်အထိဘာသာစကားနှစ်မျိုးကိုအဓိကထားခဲ့သည်။ အဓိကမေးခွန်းနှင့်အတူ: ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းသည်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့လျှင်မည်သို့နည်း။ ဤအရာသည်ကလေးတစ် ဦး သို့မဟုတ်လူကြီး၏ ဦး နှောက်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ် မူတည်၍ တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များရှိပါသလား။ ကလေးများသည်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးမည်သို့ဖြစ်လာနိုင်သနည်း။
အကယ်၍ သင်သည် Babbel နှင့်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုလေ့လာနေပါကသင်၏သင်ခန်းစာအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီးသင်၏လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်နှစ်ဘာသာစကားတတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရန်စိတ်ကူးယဉ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ခွင့်လွှတ်ခံရဖို့၊ ဒီဆောင်းပါးမှာ“ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးခြင်း” ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတယ်၊ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးကွဲပြားမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ရန်သော့အချို့ပေးလိမ့်မည်။ သင့်ဘာသာစကားလေ့လာမှု၏ထိရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သင့်ကိုလှုံ့ဆော်လိမ့်မည်။
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ လူတစ် ဦး အားတက်ကြွသော (စကားပြော၊ အရေးအသား) နှင့် passive ပုံစံ (နားထောင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်း) နှစ်ခုလုံးတွင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့်ပြောဆိုနိုင်ပါကဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောတတ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ သို့သော်လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ဘာသာနှစ်မျိုးသည်လူတစ် ဦး သည်ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးတွင်သေချာသည်။ ဤရွေ့ကားမကြာခဏပြောင်းရွှေ့လာသောနောက်ခံမှနှစ်ဘာသာစကားပြောကလေးများနှင့်အတူကိစ္စဖြစ်ပါသည်, စိတ္တဇဘာသာရပ်များ (အနုပညာ, ဒphilosophန, etc) အကြောင်းပြောဆိုရန်သူတို့၏ကျောင်းတွင်အသုံးပြုသောဘာသာစကားကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာသုံးပါလိမ့်မယ်။
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးကွဲပြားနေသော်လည်းဘာသာစကားကို“ ကျွမ်းကျင်စွာ” ပြောနိုင်သောစွမ်းရည်နှင့်မရောထွေးသင့်ပါ။ Babbel နှင့်အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုရန်သင်ယူခြင်းသည်အလွယ်တကူဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိသော်ငြားဤဘာသာစကားဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရုံမျှသာဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
ဘာသာစကားသင်ယူမှုသည်လူတစ် ဦး ၏ဘာသာစကားနှစ်မျိုးအတွက်အဓိကကျသည်။ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးမျိုးရှိသည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းအစောပိုင်းဘာသာနှစ်မျိုးသုံးဘာသာစကား: မွေးဖွားခြင်းမှဘာသာစကားနှစ်မျိုးသင်ယူခြင်း။ မိဘနှစ်ပါးမတူသောမိခင်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးရှိသောလူများမှာဤကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းနှစ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုး - အစောပိုင်းကလေးဘဝမှဒုတိယဘာသာစကားကိုမလေ့လာမီမွေးဖွားခြင်းမှဘာသာစကားတစိတ်တပိုင်းသင်ယူခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောသောကလေးထိန်းတစ်ယောက်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးသောကလေးများဖြစ်သည်။
နှောင်းပိုင်းဘာသာစကားနှစ်မျိုး - အသက် ၆ နှစ်မှ စ၍ မိခင်ဘာသာစကားမှဒုတိယဘာသာစကားကိုသင်ယူခြင်း။
အပိုဆောင်းနှစ်မျိုးသုံးဝါဒ - ဘာသာစကားသင်တန်းများမှတဆင့်ဘာသာနှစ်ဘာသာကွဲပြားမှုအောင်မြင်ခြင်း။
နုတ်နှစ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုး - ပထမဘာသာစကားကိုထိခိုက်စေသည့်ဒုတိယဘာသာစကားကိုသင်ယူခြင်း။
... ဘာသာစကားနှစ်မျိုး၏5ဒီဂရီသည်
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးရန်နည်းလမ်း (၅) ခုနှင့်အတူ၊ ဘာသာစကားနှစ်မျိုး၏ကျွမ်းကျင်မှုသည် ၅ ဒီဂရီရှိသည်။
"စစ်မှန်သော" ဘာသာစကားနှစ်မျိုး - ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကိုပြီးပြည့်စုံစွာကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာမှတ်ပုံတင်အားလုံး၊ ဘာသာရပ်အားလုံးတွင်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြနိုင်စွမ်း။
“ Semi-linguism” - ဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံး၏ဗဟုသုတအဆင့်သည်တူညီမည်မဟုတ်ပါ၊ မည်သည့်ဘာသာစကားမှအမှန်တကယ်ကျွမ်းကျင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းမှာဘာသာစကားနှစ်ခုသင်ယူသောကလေးများဖြစ်သည်။
“ Equilingualism” - ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးကိုတူညီသောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောဆိုနိုင်ပြီးမိခင်ဘာသာစကားပြောသူတစ် ဦး ၏အဆင့်သို့မရောက်ရှိစေပါ။
Diglossia - ဘာသာစကားတစ်ခုစီကိုတိကျသောအခြေအနေတွင်အသုံးပြုခြင်း။ ပါရာဂွေးနိုင်ငံတွင်ဂူအာနီနီ (နေ့စဉ်ဘဝ၌၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်) စကားပြောသောသူနှင့်ကက်စတီလီယန် (ကျောင်းတွင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးတွင်၊ ပုံမှန်မူဘောင်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုသော) များနှင့်တွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်။ Occitan, Basque သို့မဟုတ် Breton ကဲ့သို့ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားများသည်လည်း diglossia အောက်ရောက်သွားနိုင်သည်။
Passive နှစ်ဘာသာစကား - ဘာသာစကားကိုနားလည်ရန်မလိုဘဲဘာသာစကားကိုနားလည်ခြင်း။ ဤရွေ့ကား, ဒီလိုင်းများကိုရေးသားသူနှင့်အတူအမှုအရာ, စကားပြော, ဖတ်ပါသို့မဟုတ်ရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲခမာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်perfectlyုံ။
၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းအထိဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးဝါဒသည်မကောင်းသောအရာအားလုံး၏စွပ်စွဲချက်များဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောကလေးများအတွက်တာဝန်ရှိသည်၊ သိမြင်မှုတိုးတက်မှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ ပညာရေးအောင်မြင်မှုနှင့်လူမှုရေးတိုးတက်မှုကိုကာကွယ်ခြင်း
Babbel Magazine တွင်ဖတ်ပါ။
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးဝါဒသည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိဟုယနေ့လူတိုင်းကသဘောတူကြသည်။ အထူးသဖြင့် Ellen Bialystok ၏သုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဦး နှောက်အပေါ်ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးဝါဒ၏အဓိကအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
Ellen Bialystok ၏လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသူ ၄၅၀ ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးရောဂါလက္ခဏာများအားလုံးသည်တူညီသောလက္ခဏာများရှိခဲ့သည်။ နမူနာ၏တစ်ဝက်မှာနှစ်ဘာသာသုံးဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုကြပြီးသူတို့၏ဘ ၀ တွင်အနည်းဆုံးဘာသာစကားနှစ်မျိုးပုံမှန်တက်တက်ကြွကြွပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
သူ၏သုတေသနပြုချက်အရဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးလူနာများသည် monolinguals များထက်လေးနှစ်မှငါးနှစ်အကြာတွင်ရောဂါလက္ခဏာများကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းသက်သာစေသည်ဟုသူမကကောက်ချက်ချသည်။
အလားတူပင် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အိန္ဒိယသုတေသီဆူဗာနာအယ်လာဒီသည်လူ ၆၄၈ ဦး ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအလားတူရလဒ်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါရှင်းပြချက်ကျနော်တို့အသက်ကြီးလာသောအခါဘာသာစကားနှစ်မျိုးသည်ငါတို့သိမြင်စွမ်းရည်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကိစ္စကိုထိန်းသိမ်းကူညီလိမ့်မည်ဟုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ဘာသာစကားတစ်ခုသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာလျှင်ပင်သင်ယူခြင်းသည်မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုတိုးပွားစေသည်။ ဒါကြောင့် Babbel နဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုစလေ့လာဖို့ဘယ်တော့မှနောက်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။
- တစ် ဦး ထက်ပိုထိရောက် ဦး နှောက်
ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောခြင်းသည်မကြာခဏဆိုသလိုဘာသာစကားနှစ်မျိုး၏ရုန်းရင်းခတ်မှုဟုဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ကားတစ်စီးကိုတွေ့သည့်အခါနှစ်ဘာသာသုံးဘာသာစကား Franco-Spanish သည် car နှင့် carro ဟူသောစကားလုံးများကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သူသည်အခြားပြင်သစ်လူမျိုးနှင့်အတူနေပါကသူသည်ကားအကြောင်းပြောဆိုကာ carro ဟူသောစကားလုံးကိုတားဆီးနိုင်သည်။
Ellen Bialystok ၏သုတေသနပြုချက်အရဤ "double circuit" သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း၏ဤအပိုင်းကိုဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးသောကြွက်သားများကဲ့သို့ ဦး နှောက်၏ "စီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းချုပ်မှု" စနစ်အားပိုမိုအားကောင်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
လေ့ကျင့်သောအားကစားသမားတစ် ဦး သည်သာမန်လူတစ် ဦး ထက် ပို၍ လေးလံသောကိုယ်အလေးချိန်ကိုအောင်မြင်စေသည့်နည်းတူ၊ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးလုံးသည်အချို့သောသိမြင်မှုဆိုင်ရာအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပိုမိုလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း - တစ်ချိန်တည်းတွင်အရာများစွာကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ပconflictsိပက္ခများကိုဖြေရှင်းခြင်း၊ လျင်မြန်စွာရွေ့လျားခြင်း။ အခြားတစ်ခုအရေးယူတားစီး။
လေ့လာမှုအများအပြားကဘာသာစကားနှစ်မျိုး၏ ဦး နှောက်သည်ဘာသာစကားမတူသူများ၏တီထွင်မှုထက် ပို၍ ဖန်တီးမှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမဆုံးလေ့လာမှုကို ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင်ကွီဘက်၌ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုတို့အတွက်သိမြင်မှုအဆင့်တွင်တကယ့်အားသာချက်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများကာလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့သောနည်းစနစ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည် - နမူနာသေးငယ်လွန်းခြင်း၊ ပြင်ပဘက်လိုက်မှု၊ အထူးအခွင့်အရေးရှိသောလူမှုပတ် ၀ န်းကျင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၌အပြုသဘောသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာမဟုတ်သောကြားနေမဟုတ်သောအကျိုးဆက်တစ်ခုရှိလာသည်။ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးပြောတတ်သူတို့သည်မိမိတို့၏စကားလုံးများကိုရွေးချယ်ရန်ပိုမိုကြာမြင့်ပြီးဝေါဟာရနည်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘာသာစကားနှစ်မျိုးသုံးလူတစ် ဦး အားဖြစ်နိုင်သမျှအသီးများများကိုအမည်ပေးရန်တောင်းဆိုပါကဘာသာနှစ်မျိုးတည်းဖြင့်ရည်ညွှန်းထားသောအသီးများအရေအတွက်ကိုရောက်ရှိရန်အချိန်ယူရမည်။
တန်းတူ Tranquillus | ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2021 | web ပေါ်မှာ |
ကမ္ဘာပေါ်တွင်စပီကာပေါင်းသန်း ၈၆၀ ကျော်ရှိပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ဤသို့ပြောပါ။ တရုတ်စာသင်ယူချင်ပါသလား။ ဤနေရာတွင်သင့်အား Mandarin Mandarin စာလေ့လာရန်အကြောင်းပြချက်များ၊ ရှည်လျားပြီးလှပသောသင်ယူမှုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များကိုဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသည်။ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာငါတို့အားလုံးကိုအရာရာကိုရှင်းပြတယ်။
ဒါကြောင့်တရုတ်ဘာသာစကားဟာသင်ကြားရလွယ်ကူတဲ့ဘာသာစကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်စတင်ချင်သောအနောက်နိုင်ငံများအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အကျိုးစီးပွားများစွာကျန်ရှိနေသေးသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်၏ငရဲ ... စိန်ခေါ်မှုများကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်၊ ၎င်းသည်သင်ယူရန်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေပြီ။ အခြားသူများအတွက်မူယနေ့ခေတ် Mandarin ကိုသင်ယူရန်အခြားကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်တရုတ်ဘာသာစကားပြောသောလူ ဦး ရေသန်း ၈၆၀ ကျော်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြောအများဆုံးနှင့်အသုံးပြုသောဘာသာစကားဖြစ်သည်။ သင့်အားပြောရန်မှာသင်ကြားရန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည် - သန်း ၈၆၀ ဆက်သွယ်မည့်သူနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ တကယ်တော့တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးရှိပြီးပြည်နယ်များသို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ သို့သော်တရုတ်လူမျိုးများကိုလူအများစုကနားလည်ကြသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးတရားဝင်ဘာသာစကားအဖြစ်လည်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးတိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတရုတ် Mandarin အကြောင်းပြောနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် Mandarin (Standard Chinese) လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရေးတွင်အသုံးဝင်သည် (နှင့်သင်၏ CV ကိုမြှင့်တင်ရန်) ^
တရုတ်သည်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးတွင်အဓိကကစားသမားဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်များနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစပီကာများအကြားလွှမ်းမိုးမှုအကြား၎င်းသည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်။ အထူးသဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်များတွင်သင်ယူခြင်း (ပါးစပ်နှင့် / သို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားထားသောဗဟုသုတ) သည် CV အတွက်အလွန်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ ) ပညာရှင်များအားဖြင့်။ သင်၏ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်မှာဤစာမေးပွဲကိုဖြေဆိုပြီးနောက်အလုပ်ရနိုင်သည်။
သင်၏ CV တွင်“ တရုတ် - ကောင်းသောအဆင့်” လိုင်းကိုထည့်ရန်အတွက်တရုတ်စာကိုသာဂရုစိုက်ပါ။ သို့သော်သင်လေ့လာရန်လိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စည်းကမ်းများကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏လေ့လာသင်ယူမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ကိုသင်ရှာရမည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အာရှသားများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ၏ဤဒေသတွင်နေထိုင်ခြင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင်ဤစျေးကွက်နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာရှိခြင်းသည်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများဖြစ်သည်။ သင်၏ CV တွင်မျဉ်းချရန်တရုတ်စာသင်ကြားခြင်းသည်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။
၎င်းကိုဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုစိတ် ၀ င်စားစွာလေ့လာပါ
တရုတ်ဘာသာစကားသည်ကြွယ်ဝပြီးစိတ်ဝင်စားစရာလူများစွာအတွက်ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည်စစ်မှန်သောကိလေသာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသည်သင့်အားဤယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုနားလည်စေရန်၊ တရုတ်စာဖြင့်ရုပ်ရှင်နှင့်စာအုပ်များကိုလက်လှမ်းမီရန်ကူညီနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏အစားအစာ၊ ရိုးရာဆေးပညာ၊ အတွေးအခေါ်၊ အလုပ်ကျင့် ၀ တ်၊ ဘာသာတရားနှင့်ကိုယ်ခံပညာပင်လျှင်။ စိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင်သင်ယူဖို့လှုံ့ဆော်ခံရလိမ့်မယ်။ တနည်းကား၊ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကိုသင်ယူရန်ဝေးကွာစေလိမ့်မည်။
ကိရိယာများစွာသည်သင့်အားကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည်။ တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအကြံပြုသောနည်းလမ်းများသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ကွန်ဖြူးရှပ်၏ဘာသာစကားကိုလေ့လာရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်းများသည်ဘာသာစကားသင်ယူခြင်းအတွက်အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ၄ င်းတို့ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းတွင်သုံးနိုင်ပြီးနေရာတိုင်းတွင်လိုက်သွားနိုင်သည် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အားကစားလုပ်သည့်အခါ၊ စူပါမားကက်တန်းများ ... ) ။ သင်ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူရန်လိုအပ်သည်ဟုသင်လိုအပ်သည့်အခါသူတို့သည်အသိပေးချက်များကိုပေးပို့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်၊ လက်တွေ့ကျရန်နှင့်အကျိုးရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။
MosaLingua မှမန်ဒရင်းဘာသာစကားကိုသင်ယူရန်လျှောက်လွှာသည်သင့်အားစကားလုံးများနှင့်စကားစုများကိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည်၊ အဆင့် A1 မှစတင် - အဆင့် C1 အထိအဆင့်မြင့်သည်။ ၎င်းတွင်ဝေါဟာရကဒ် ၂၀၀၀ ကျော်ပါရှိပြီးအသုံးအများဆုံးစကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှုန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးချမှု၏အားသာချက်မှာနည်းစနစ်၏ထိရောက်မှုအပြင်၎င်းသည်ဝေါဟာရနှင့်၎င်းအသံထွက်ကိုသင်ယူရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား“ မြန်ဆန်စွာ” ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
မကြာခဏကိုးကားထားသော Pleco အက်ပလီကေးရှင်းသည်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာတစ်လမ်းအတွက် multifunction အဘိဓါန်အဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ Pinyin (အသံထွက်ကူးယူခြင်း) တွင်စာလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်စာလုံးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထိုအက်ပ်သည်သင့်အားဇာတ်ကောင်၊ ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်၊ အသံထွက်၊ လိုင်းများကိုပေးသည်။
သင်နှစ်သက်သော app တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်ကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည့် application တစ်ခု (ဆက်သွယ်ရေး၊ စာရေး၊ ခရီးသွားရန်၊ တရုတ်တွင်အလုပ်တစ်ခုရှာရန်ဖြစ်စေ) အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ သင်ကြားရေးနည်းစနစ်များနှင့်၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ ၎င်းအတွက်သင်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောကျွန်ုပ်တို့၏ MosaLingua application ၏အခမဲ့မူကွဲကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ဆရာများစွာ (သို့) ရိုးရှင်းသောကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သင်ယူသောသင်ယူသူများသည်ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်သင်ယူရန်ပိုမိုစိတ်အားထက်သန်စေရန် YouTube လိုင်းများကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဗွီဒီယိုများ၏အားသာချက်များမှာများစွာသော (ကြီးမားသောပမာဏ၊ အခမဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားခြင်း) ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပထမအားသာချက်မှာ၎င်းတို့သည်သင့်အားပါးစပ် / အသံ / တရုတ်စကားပြောသင်ကြားခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်နှင့်ဒေသခံများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုတရုတ် Mandarin ။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါက၊
အသံထွက်ပြောခြင်းနှင့်“ ပြောခြင်း” အပြင်အချို့သောဗီဒီယိုများသို့မဟုတ်ရုပ်သံလိုင်းများသည်သင်၏လေ့လာသင်ယူမှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများဖြစ်သည့်ဝေါဟာရ၊ ဆက်စပ်မှုစသည်တို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လိုင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာအကောင်းဆုံးနှင့်သင့်တော်သောလမ်းကြောင်းများကိုရှာဖွေရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်၊ YouTube ရှာဖွေရေးဘားတွင်“ တရုတ်စာသင်ယူသည်” ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ပြီးခဲ့သည့်အပိုဒ်ကိုဆက်လက်လေ့လာရန် YouTube channel များအပြင်အခြားအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းများရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ အထူးသဖြင့်ဗွီဒီယိုအရင်းအမြစ်များစွာကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မည့် Youku နှင့် Tudou ဆိုဒ်များကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
သင်ဘာသာစကားသင်ယူနိုင်သည့်အနည်းဆုံးသင်၏လေ့လာမှုအတွက်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချနိုင်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစွာလည်းရှိသည်။ ဝေါဟာရ၊ သဒ္ဒါ၊ ဆက်စပ်မှု၊ အရေးအသားစနစ်၊ အသံ၊ အခြားသင်ခန်းစာများ ... သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုအင်တာနက်စာမျက်နှာများပေါ်တွင်တွေ့ရမည်။ ပြနာကသင်တစ်လမ်းတည်းဖြင့်သင်ယူမှာမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသောဘာသာစကားများအတွက်နည်းပြများလိုအပ်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းအားဖြင့်ဤရရှိနိုင်သည့်အရင်းအမြစ်ပမာဏသည်ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် - ဥရောပသားတွေအတွက်တရုတ် (ဥရောပသမဂ္ဂ၏အစပျိုးမှုဖြင့်ဖန်တီးထားခြင်း)၊ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုဒါမှမဟုတ်သင်ခန်းစာများစွာကိုစုစည်းထားသည့်တရုတ်အမျိုးသားများကိုတောင်အကြံပြုလိုပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းအင်တာနက်သည်ယခုအခါသင့်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားဖြင့်သင်ယူရန်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်လိုသူများ၊ သူတို့၏သင်ယူမှုကိုလမ်းညွှန်ရန်လိုအပ်သောသူများသည်သင်တရုတ်ဘာသာသင်ဆရာနှင့်သင်နိုင်ကြောင်းသိထားပါ။ ၎င်းတို့သည်အွန်လိုင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်စေတရုတ်သင်ခန်းစာများဖြစ်စေ၊ အုပ်စုလိုက်ဖြစ်စေတစ် ဦး ချင်းဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။ တိုးတက်မှုအတွက်သင်နည်းပြလိုအပ်သည်ဟုခံစားရလျှင်၎င်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Preply (သို့) Verbling ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များသည်သင့်အားအွန်လိုင်းမှဆရာများနှင့် (ကိုယ်ပိုင်အခကြေးငွေ ပေး၍) ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင်ကြားမှုကိုခံစားခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်အထူးပြုဆရာများ၏ကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များမှအကျိုးရရှိသည်။ ဤသည်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအကျိုးကို။
သင်နှင့်သင့်တော်မည့်နည်းလမ်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရွေးချယ်ရန်မှာကျွန်ုပ်ရည်မှန်းထားသည့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်သည်တစ်နှစ်အတွင်းခရီးကိုစီစဉ်ရန်သင်၏အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဝေါဟာရကိုသင်ယူလိုပါကအွန်လိုင်းရှိရရှိနိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ရင်းမြစ်များဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်စတင်နိုင်သည်။ သငျသညျမစ်ရှင်, တိကျသောဝေါဟာရနှင့်ကောင်းမွန်သောမိန့်ခွန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်မြန်ဆန်စွာသင်ယူရန်လိုအပ်ပါက, ပုဂ္ဂလိကသင်ခန်းစာများကောင်းတစ် ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူရန်အပြင်ဘာသာစကားများစွာသင်ယူရန်၊ အထောက်အပံ့နှင့်နည်းစနစ်များကိုမြှောက်ထားခြင်းသည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ သို့ဖြင့်သင်သည်လူတိုင်း၏အကောင်းဆုံးမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်သည်တရုတ်ဘာသာစကားနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအပြည့်အဝမြင်နိုင်ရန်အရင်းအမြစ်များကိုတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်။
လူတိုင်းမေးသောမေးခွန်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ဘာသာကိုလက်ချောင်းထိပ်များ၊ အသံများ၊ မှန်ကန်သောအသံထွက်များ၊ အမြင့်ဆုံးသောဝေါဟာရများကိုကျွမ်းကျင်စွာသင်အချိန်ယူရမည်။ ပြီးတော့ရှေ့လမ်းကငါတို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးမဟုတ်ဘူး။ စပိန်စကားကိုကျွမ်းကျင်ဖို့လမ်းကအများကြီးပိုလွယ်နေပုံရတယ်။
သို့သော်တရုတ်ဘာသာဖြင့်အခြေခံသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်အဆင့်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်ကိုသိခြင်းသည်မရှုပ်ထွေးပါ။ ၎င်းသည်လူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှု၊ ပြဌာန်းခွင့်နှင့်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများနှင့်ကိရိယာများရှိသူအားလုံးထံမှ။ တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူခြင်းသည်အခြားမည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆိုသင်ယူခြင်းကဲ့သို့ပင်သင်ယူသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှစ်ခုလုံးအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒီသုံးခုကိုအတူတကွထားပါ၊ ပြီးရင်မင်းရဲ့သင်ယူမှုကကောင်းလာလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်မည်မျှကြာမည်နည်း။ ၎င်းအားလုံးသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်၊ ယင်းကိုလေ့လာရသည့်အချိန်နှင့်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဘာကြောင့်တရုတ်စာသင်ယူရတာလဲ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်မဟုတ်လော ဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုရလျှင်တရုတ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာသည့်အခါ (ဆိုလိုသည်မှာအခြားမည်သည့်ဘာသာကိုမဆိုငါလိုလို) ၄ င်း၏စကားပြောစွမ်းရည်ကိုအာရုံစိုက်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် ၄- အသံပါသောအသံထွက်အတွက်တရုတ်ဘာသာစကားသည်သင်ယူရလွယ်ကူသောစကားမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သလိုသင်ကြားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်သင့်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်သင်ဘာမျှမဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
ဒီ“ တန်ချိန်” တွေကဘာတွေဖြစ်လာတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ တရုတ်ဘာသာတွင်တူညီသောစကားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားစွာအသံထွက်လျှင်အဓိပ္ပါယ် ၄ ခုရှိနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသာဓကမှာမာ (= mom)၊ m (= hemp), mǎ (= မြင်း) နှင့် m (= စော်ကားမှု) ဖြစ်သည်။ အက္ခရာနှစ်လုံး၊ စကားလုံး ၄ လုံး၊ တန်ချိန် ၄ ခုစီ။ ရုတ်တရက် ၁။ တရုတ်စာသင်ယူခြင်းနှင့်ပြောဆိုခြင်းသည်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသည်၊ သို့သော် ၂။ အသံထွက်ကောင်းခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုလည်းကောင်း၊ ဤနေရာတွင်မှန်ကန်သောအသံကိုလည်းကောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ ၎င်းသည်တရုတ်ဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
အဆိုပါသေံဆက်ဆက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, ဒါပေမယ့်သူကမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြရန်တစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ စကားစပ်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ငါအထက်ကစပိန်စကားပြောပေမယ့်ဒီအဓိပ္ပာယ်အတွက်စပိန်နှင့် Mandarin အဘိဓါန်တရုတ် (အတန်ငယ်) ဆင်တူသည်။ အမှန်မှာ၊ စပိန်ဘာသာဖြင့်ဘာသာရေးနာမ်စားများကိုအသုံးမပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စားသည်၊ စားသည်၊ စားသည်ဟုဆိုမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့စားရမည်၊ စားပါ၊ စားပါဟုပြောမည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်မှာစကားပြောနေသူနှင့် (ကြိယာအဆုံး) ကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်စေမည့်အခြေအနေဖြစ်သည်။ ဒီမှာတရုတ်တွေအတွက်တော့အတူတူပါပဲ၊ ဝါကျထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စေတဲ့အခြေအနေမှာပါ။ သင်ကြားသော“ ma” သည်မြင်းသို့မဟုတ်မိခင်တစ် ဦး ကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုသည်ကိုသင်မသိပါ။ ကောင်းပြီ, အခြေအနေတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီပါ။ တရုတ်ဘာသာဖြင့် tones များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုမသေချာပါ။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ စကားစပ်ကစကားပြောသူကိုဘာအကြောင်းပြောနိုင်မလဲဆိုတာသေချာသည်။
သင်၏အသံထွက်၊ အသံအနိမ့်အမြင့်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်သည်ဤလေ့လာမှုကိုသင့်ဘာသာစတင်ခဲ့လျှင်ပင်။
မှန်ကန်သောအသံထွက်များနှင့်အသံများကိုနားထောင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အသံသွင်းချက်များကို စုစည်း၍ စုစည်းထားသောဆိုဒ်များရှိသည်။ ငါအထူးသဖြင့် forvo ကိုရည်ညွှန်းနေပါတယ်။ ဆိုက်တွင်ရှိသောဒေသခံများမှမှတ်တမ်းတင်ထားသောအသံများကိုနားထောင်ရန် pinyin (အသံထွက်ကူးယူခြင်းနှင့်လက်တင်အက္ခရာများ) သို့မဟုတ်တရုတ်အက္ခရာများတွင်စာလုံးတစ်လုံးကိုသာရိုက်ရမည်။
တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ app သည်သင်အားဝေါဟာရစကားလုံးများကိုပေးထားပြီးသူတို့၏အသံထွက်ကိုမိခင်ဘာသာစကားပြောသူမှမှတ်တမ်းတင်ထားသည် လက်ျာအသံနှင့်မှန်ကန်သောအသံထွက်သောစကားလုံးတစ်လုံးကိုသင်နားထောင်နိုင်သည်။
ပုဂ္ဂလိကကျူရှင်အပြင်သင်၌မည်သူနှင့်စကားပြောမည့်အွန်လိုင်းမိတ်ဖက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူချင်သောတရုတ်လူမျိုးနှင့်အနည်းငယ်စကားပြောနိုင်သည့်ပြင်သစ်စကားနည်းသောဒေသခံများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာသာစကားဖလှယ်ခြင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီးသင်၏နှုတ်ဖြင့်ဖော်ပြမှုကိုဘာသာစကားဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်မှာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းဆောင်းပါးကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့
အလွယ်တကူမန်ဒရင်းတရုတ်ဘာသာသည်ဆက်စပ်မှုများ၊ ငြင်းဆန်မှုများသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအခြားအခက်အခဲများမပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏကြားရသည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သော်လည်းသတိပြုပါ - ဘာသာစကားတွင်အခက်အခဲအချို့ရှိပါသည်။ စာအရေးအသားစနစ်သည်၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် francophones အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးတရုတ်ဘာသာမှာတရုတ်ဘာသာမှာအက္ခရာမရှိဘူးဆိုတာသင်သိရမယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးစီကို sinograms လို့ခေါ်တဲ့စာလုံးတစ်လုံး (သို့) တစ်ခုထက်ပိုစွာဖွဲ့စည်းထားတယ် (ငါတို့ယဉ်ကျေးမှုမှာပုံဆွဲခြင်းများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်) ဒါကြောင့်ငါတို့ကအက္ခရာကိုမလေ့လာသင့်ဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေ့လာသင်ယူဖြစ်စေမ, ဘာသာစကား၏ဤရှုထောင့်ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ကူညီရရှိနိုင် tools တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တဖန်ရှိပါတယ်။
သင်တရုတ်စာအရေးအသားသင်ယူရန်ကူညီရန် tools များ ^
Applications ကို ^
ဝေါဟာရသင်ယူခြင်းအတွက်မူဇာတ်ကောင်များကိုသင်ယူရန်အတွက်သင့်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများရှိသည်။ သို့မဟုတ်ယခုပင်စာရေးခြင်းစနစ်အသစ်နှင့်သင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန် ... ပထမတစ်ချက်မှာဤစာလုံးများသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ ထို့အပြင်သင်သည်အဓိပ္ပာယ်သာမကအသံထွက်ကိုလည်းလေ့လာရမည်၊ အသိအမှတ်ပြုပြီးရေးရမည်။ မလွယ်ဘူး
Skritter အက်ပလီကေးရှင်းကို (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ကျွန်ုပ်တို့ကိုအကြိမ်များစွာအကြံပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် MosaLingua ကဲ့သို့သောအက္ခရာများကိုလေ့လာရန်၊ အသိအမှတ်ပြုရန်၊ အသံထွက်ရန်နှင့်ရေးသားရန်အတွက်အကွာအဝေးတနေရာမှထပ်တလဲလဲပြုလုပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Chineasy သည်သင်၏အမြင်အာရုံမှတ်ဥာဏ်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ဇာတ်ကောင်များကိုလေ့လာရန်အတွက်ရုပ်ပုံများနှင့် sinogram များကိုဆက်သွယ်ပေးသောအခြား application တစ်ခုဖြစ်သည်။
iTunes သို့မဟုတ် Google Play တွင်“ Chinese writing” သို့မဟုတ်“ Chinese writing” ကိုရိုက်ခြင်းဖြင့်အခြားအက်ပ်များကိုလည်းရှာနိုင်သည်။
နောက်တကြိမ်တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု site သည်သင်ဘာသာစကားလေ့လာရန်ကူညီရန်အရင်းအမြစ်များ၊ ကိရိယာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများများစွာကြွယ်ဝသည်။ ထို့ကြောင့်တရုတ်စာအရေးအသားအပေါ် အခြေခံ၍ သင်ခန်းစာများစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒီလိုမျိုး၊ သင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်စေရန်နှင့်တရုတ်စာအရေးအသားကိုလေ့ကျင့်ရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစွာရှိသည်။
ဥပမာ - Chine Nouvelle site သည်စာလုံးများ၏ရှင်းလင်းချက်နှင့်ဖိုင်များကိုအခမဲ့ (အခမဲ့) ပေးထားသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားမည်သို့သင့်လျော်စွာအသုံးပြုရမည်ကိုပြသည်။
တရုတ်အရေးအသားကိုလေ့လာခြင်းသည်အရေးကြီးပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလျှင်သော်၎င်း၊ သင်ကြားမှုသည်၎င်းကိုသာကန့်သတ်မထားပါနှင့်။ ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲ: ဆက်သွယ်ရေးနိုင်ရန်အတွက်ပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ စာဖြင့်ရေးသားထားသောစကားလုံးကိုအာရုံမစိုက်ပါ၊
တရုတ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါတို့ site ပေါ်တွင်သင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါတရုတ်သင်ယူခြင်းအပေါ်ခေါင်းစဉ်များတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏တရုတ်အမျိုးအစားသို့သွားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တရုတ်ကိုလေ့လာရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရင်းအမြစ်စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ဒီနေရာမှာမင်းတို့ရဲ့မေးခွန်းအားလုံးကိုမေးမြန်းဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရန်။ မင်းအဲဒါကိုဘယ်လိုထင်သလဲ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်စုတစ်ခုချန်ထားပါ၊ ၎င်းသည်ဆောင်းပါးများထပ်ရေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်
5 /5(1 မဲ)
ဒီဆောင်းပါးကိုကြိုက်သလား အခမဲ့ MosaLingua ကလပ်သို့ဝင်ရောက်ပါ
လူသန်းပေါင်းများစွာမှထိုအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရသည်။ ၁၀၀% အခမဲ့ဖြစ်သည်
တရုတ် Mandarin ကိုလေ့လာချင်ပါသလား။
သတင်းကောင်းပထမ: သင့်ကိုကူညီနိုင်အောင်ဒုတိယအကြိမ်သတင်းကောင်း - အခုသင်အခမဲ့စတင်နိုင်သည်။ သင်၏အခမဲ့စမ်းသပ်မှုကိုဖွင့်ပါ၊ ဤထိရောက်သောနည်းလမ်းအားဖြင့်တရုတ်တရုတ်စာကို ၁၅ ရက်ကြာလေ့လာပါ။
ဝေါဟာရများသင်ယူရန်အတွက်ကဒ်ပြားများ၊ စာတန်းထိုး၊ အသံစာအုပ်များ၊ သင့်အဆင့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသောမူရင်းဗားရှင်းရှိဗီဒီယိုများ - MosaLingua ဝက်ဘ်သည်ဤအရာအားလုံးကိုရယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ ချက်ချင်းစတင်ပါ (၎င်းသည်အခမဲ့နှင့်စွန့်စားမှုကင်းသော) ။